ပြောင်းလဲခဲ့ရ ထိုခဏ – Grab Love Story
ကျွန်​​တော်​တခါမှ မစဉ်းစာခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒီလိုဖြစ်​လာမယ်​ဆိုတာလဲ စကားအဖြစ်​​တောင်​မ​ပြောခဲ့ဘူးဘူး၊ ​လောကကြီးက တခါတ​လေ ခံယူချက်​​တွေ စိတ်​ဓာတ်​​တွေကို ​ပြောင်းလည်းသွား​အောင်​ အဖြစ်​အပျက်​​တွေကို ဖန်​တီးကြုံကြိုက်​​စေတယ်​၊
လိုက်​ပွဲဆိုတာမျိုး ​ပေါင်​တ​ချောင်းပိုင်​တယ်​ဆိုတာမျိုး​ပြောတဲ့သူကို ခပ်​ညံ့ညံ့​ယောက်​ကျားလို့ မြင်​​လေ့ရှိတဲ့ ကျွန်​​တော်​ဟာ အခုမှန်​ကြ ည့်​တိုင်း အဲ့လိုလူကိုမြင်​​နေရ​အောင်​ ဘယ်​လို​ပြောင်းလဲခဲ့တာလဲ ဘာ​တွေက ဖြစ်​​စေခဲ့တာလဲ ​သေချာတာက​တော့ ကျွန်​​တော်​ကိုယ်​တိုင်​ပါဝင်​ဖြစ်​ပျက်​ခဲ့မိတာ၊ မူးလို့ဖြစ်​သွားတာ စိတ်​မထိမ်းနိုင်​လို့ပါဆိုတာ​တွေကို ကျွန်​​တော်​လက်​မခံခဲ့မိဘူး၊ စိတ်​ထဲမှာမရှိရင်​ မဖြစ်​ဘူးလို့ ထင်​ခဲ့မိ​ပေမဲ့ တကယ်​ကြုံလာ​တော့ ​သွေးထဲက ဆန္ဒ​တွေဟာ ကျွန်​​တော်​မသိ​အောင်​ ကာလအ​တော်​ကြာပုန်း​နေခဲ့တယ်​ဆိုတာသိလိုက်​ရတယ်​၊
ကျွန်​​တော့ မိန်းမက ညီအမ၃​ယောက်မှာ အကြီးဆုံး ဒုတိယနဲ့ အငယ်​ဆုံးက ၅နှစ်​စီ ငယ်​တယ်​ ၊ ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ အထင်​အမြင်​​တွေကို​ပြောင်းလဲပြီး ပုန်း​နေတဲ့ရမက်​​တွေကို ထွက်​​ပေါ်​စေခဲ့တာက ဒုတိယ​မြောက်​ ​ပေါ့၊ သူက ကျွန်​​တော်​တို့ သမီးရီးစားဘဝမှာ အိမ်​​ထောင်​ကျတာ၊ က​လေးတ​ယောက်​ရပြီး သူ့​ယောက်​ကျားနဲ့ အဆင်​မ​ပြေလို့တရားဝင်​ကွာရှင်းလိုက်​ကြတာ၊ တိတိကျကျ​တော့မသိ​ပေမဲ့ ဟို​ကောင်​က မိန်းမတ​ယောက်​နဲ့ရှုပ်​တယ်​​ပြောတာပဲ ၊ အ​တော်​ညံ့တဲ့​ကောင်​ဗျာ၊ အ​တော်​နုံတဲ့ ကျွန်​​တော်​ကလဲ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိဘဲ မကွဲဘို့မကွာဘိုဝင်​​ပြော​သေးတာ ​နောက်​ပိုင်းသူမနဲ့ပတ်​သက်​မိ​တော့မှ ဟိုအ​ကောင်​နဲ့​ပေါင်းမဖြစ်​​တဲ့အ​ခြေခံအ​ကြောင်းတွေသိရတာ​ပေါ့။
သူမနာမည်​က မဖြူ ၊ အဲ့တုန်းက သူ့အသက်​က ၃၀၊ အိမ်​​ထောင်​ကျတာ ၂၄မှာ ၊၅နှစ်​​ပေါင်း က​လေးတ​ယောက်​ရပြီး ကွဲသွားတာ တနှစ်​​လောက်​မှာ​ပေါ့၊ သူက အမှန်​​ပြောရရင်​ကျုပ်​မိန်းမထက်​လှတယ်​ ၊ အရပ်​က ၅​ပေ၄​လောက်​၊ အရင်​ကထက်​ က​လေး​မွေးပြီးမှဖွင့်​ဖြိုးလာတာ ​ယောက်​ကျားတိုင်းလည်​ပြန်​ကြည့်​ရတဲ့ကိုယ်​လုံးမျိုး ၊အထုးခြားဆုံးက ၂၄လက်​မခါးရှည်​ရှည်​နဲ့ ၃၈​လောက်​၇ှိတဲ့တင်​ကားကားကြီး​တွေ​ပေါ့ ၊ ဘာစိတ်​မှမရှိ​ပေမဲ့ အဲ့ပစ္စည်းကြီး​တွေကို​တော့ကျုပ်​သတိထားမိတာ အမှန်​ပါ၊သူ့​ယောက်​ကျား အိမ်​မှာသိပ်​မရှိဘဲခရီးထွက်​​နေတာကို​တောင်​​တွေးပြီးအံ့သြ​နေခဲ့ဘူးပါတယ်​၊ဒါ​လောက်​​ကောင်းတာကို ဘာလို့အကြာကြီးထားထားပြီးသွားရတာလဲလို့..​နောက်​ပိုင်းမှသိရတာက သူတို့နှစ်​​ယောက်​ဟာ အိပ်​ယာထဲမှာ အ​ပေးအယူမကိုက်​ အကြိုက်​မတူကြပါဘူး၊ မဖြူက ပွင့်​ပွင့်​လင်းလင်း​ပြောရရင်​ ခန္ဒာကိုယ်​က ခါးရှည်​ဖင်​​ကောက်​လီးမ​ကြောက်​တဲ့ ခန္ဒာကိုယ်​အချိုးစား ဟို​မောင်​က လူ​ရော လီး​ရော နံပိန်​၊ သာမှန်​ထက်​ ခံစားနိုင်​တဲ့မိန်းမတ​ယောက်​အတွက်​ သာမန်​အရွယ်​စားထက်​ အနည်းငယ်​​ရော့နည်း​နေတဲ့ အရွယ်​အစားနဲ့ ​ယောက်​ကျားကိုရထားတာဟာ ဆင်းရဲဒုက္ခတခုပါ၊ အရွယ်​အစားထက်​ အဓိကကျတဲ့ အ​ပေးအယူပိုင်းက​တော့ သူတို့နှစ်​​ယောက်​ကို တဖြည်းဖြည်း ​ဝေး​စေခဲ့တဲ့ အဓိကတရားခံ​ပေါ့၊ သ​ကောင့်​သားက ကိုယ့်​အားနဲချက်​ကိုမသိဘဲ နုးနပ်​​နေရင်​ အ​ရေ​တွေနဲလုပ်​မ​ကောင်းဘူး ဒီအတိုင်းလုပ်​မှ ကြပ်​တာဆိုပြီး လုပ်​​လေ့ရှိ​တော့ အရွယ်​အစား​ပေမမှီ​ပေမဲ့ နာကျင်​စွာခံစားရ​စေတဲ့အပြင်​ အနည်းငယ်​သက်​သာလာ​အောင်​ခံန္ဒကိုယ်​ကတုန့်​ပြန်​လာချိန်​မှာ ​မောင်​မင်းကြီးသားကပြီးသွားပြီ၊ တဝက်​တပျက်​နဲ့ အနာခံလိုက်​ရတာ​တွေများလာ​တော့ အတူမ​နေချင်​​တော့ဘူး၊ဟို​မောင်​ကလဲ လုပ်​မ​ကောင်းဘူးလို့ဖြစ်​သလားမသိဘူး​နောက်​ပိုင်းမလုပ်​​တော့ဘူးတဲ့ ၊မဖြူက​တော့ သမီးရည်းစားဘဝကအ​တွေ့အထိ​တွေကိုသတိရရင်​ကိုယ့်​ဖာသာအာသာဖြည်​တဲ့အကျင့်​​လေးရလာတာ​ပေါ့၊ စိတ်​ကူးထဲမှာသူ့​ယောက်​ကျားပြတဲ့ အ​ခွေထဲကလို အပီအပြင်​အစို့အရက်​ခံရင်း​ပေါ့၊အ​ခွေ​တွေထဲက မင်းသမီး​တွေဟာ သူနဲ့မကွာသလိုမြင်​၇​ပေမဲ့ မင်းသား​တွေက သူ့​ယောက်​ကျားနဲ့ အ​တော်​ကွာခြား​နေလို့ ​မေးကြည့်​​တော့ ပြန်​​ဖြေတာက လူ​တွေကြည့်​​ကောင်း​အောင်​ မ​တော်​တ​ရော်​ကြီး​နေတဲ့သူ​တွေနဲ့ထည့်​ရိုက်​တာ အပြင်​မှာတကယ်​မရှိဘူးတဲ့၊ အပြင်​မှာတကယ်​မရှိဘူးသာ​ပြောတယ်​ အဲ့အထဲကလိုပုံစံ​တွေနဲ့လုပ်​ ​လေးဘက်​​ထောက်​ခိုင်းပြီး တင်​ပါးကို တဖျန်းဖျန်းရိုက်​တာမျိုး​တွေ​ရော ​နောက်​ဆုံး သူ့ဟာကို မဖြူကိုစုပ်​ခိုင်းတဲ့အထိ​ပေါ့၊ မလုပ်​တတ်​လုပ်​တတ်​နဲ့ အ​ခွေထဲကလို လုပ်​​ပေးခဲ့​ပါတယ်​ ​မျော်​လင့်​ချက်​​လေးတခုနဲ့​ပေါ့ သူ​ရောအ​ခွေထဲကလို ပြန်​လုပ်​​ပေး​လေမလား​ပေါ့ ၊ မဖြူအရမ်းခံစားကြည့်​ချင်​​ပေမဲ့ ​ပြောမထွက်​ခဲ့သလို သူကလဲ လုပ်​မ​ပေးခဲ့ပါဘူး၊ နို့​တောင်​သမီးရည်းစားဘဝကလို ကိုင်​တာစို့တာမျိုး သိပ်​မလုပ်​​လေ​တော့ မဖြူခမျာ က​လေး​မွေးပြီးနို့​ချောင်းမပွင့်​ နို့​ကောင်း​ကောင်းမထွက်​လို့ က​လေးကို နို့မတိုက်​ခဲ့ရပါဘူး၊ သူ့​ယောက်​ကျားရဲ့ တကိုယ်​​ကောင်းဆန်​ ညံ့ဖျင်းမှု​တွေဟာ နို့တင်​နာရီဝက်​​လောက်​စို့ မမှုတ်​ရရင်​ မလိုးတတ်​တဲ့ ကျွန်​​တော့်​အတွက်​ ကြိုတင်​စီစဉ်​ထားသလိုပါပဲ၊ ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ လိုး​နေတုန်းပုံစံ​ပြောင်း
ကျွန်​တော်​က လိုး​နေတုန်း ပုံစံ​ပြောင်းရင်​တခါထပ်​မှုတ်​​လေ့ရှိ​တော့ မဖြုကိုလဲ လိုးရက်​တန်းလန်း အ​ရေ​တွေနဲ့ကို အားရပါးရမှုတ်​လိုက်​ ထပ်​လိုးလိုက်​နဲ့ ဆို​တော့ မဖြူခမျာတလှပ်​လှပ်​နဲ့ ကျွန်​​တော့်​ကိုအသဲစွဲ​တော့တာ​ပေါ့၊
ဇာတ်​လမ်းအစကဒီလိုဗျ မဖြူတို့က ရန်​ကုန်​နားကမြို့ကြီးတခုမှာ​နေတာ၊ကျွန်​​တော်​တို့လင်​မယားက ရန်​ကုန်​မှာ အ​နေလည်းမနီးစပ်​သလို ကြံခြင်​ရင်​​တောင်​အခွင့်​မသာပါဘူး၊ သူတို့စီသွားလည်​လဲ မိန်းမကပါ တအိမ်​လုံးလဲရှိ​တော့ ဘယ်​လိုမှ ဖြစ်​လာစရာကိုမရှိခဲ့တာပါ၊ ကံကြမ္မာကဖန်​တီးလာတာက သူတို့ ညီမဝမ်းကွဲတ​ယောက်​ရဲ့ မင်္ဂလာ​ဆောင်​၊ ကျွန်​​တော်​တို့လင်​မယားလဲ အမျိုးအရင်းဆို​တော့ သွားရတာ​ပေါ့၊ ပထမ မြို့​ပေါ်မှာတပွဲလုပ်​ပြီး ​နောက်​၂ရက်​မှ သတိုးသားရွာမှာထပ်​လုပ်​ကြမှာ၊ အဲ့မြို့​ပေါ်က မင်္ဂလာပွဲက ကျုပ်​ဘဝရဲ့ အလှည့်​အ​ပြောင်းပဲ၊
အဲ့​နေ့က အားလုံးကိုယ်​စီ မင်္ဂလာပွဲ၈နာရီအမှီ အားလုံး​စော​စောထ ပြင်​ကြဆင်​ကြ​ပေါ့၊ အိမ်​ကလူ​တွေအားလုံးက မိတ်​ကပ်​ဆရာ​တွေကို အိမ်​မှာ​ခေါ်ပြင်​ခိုင်း​ပေမဲ့ မဖြူသူငယ်​ချင်း အ​ခြောက်​မက အဲ့​နေ့မှာတခြားသူတို့သမီး ပြင်​ဖို့လက်​ခံထား​တော့ သူ့ဆိုင်​ကိုလာခိုင်းတာ၊ သွားပို့​တော့လဲ ကျွန်​​တော်​ပို့ခဲ့တာပဲ ၊ ​စောလဲ​စောပါတယ်​ ၊ မဖြူလဲ ဝတ်​မဲ့အဝတ်​ထုတ်​​​လေးပိုက်​ပြီး မနက်​စာ​တောင်​ပြီး​အောင်​မစားပဲ ကျွန်​​တော့ကား​ပေါ်လိုက်​လာတာပါ၊ ပြန်​လာ​ခေါ်ဖို့​မေး​တော့ ပြီးတာနဲ့ဖုန်းဆက်​မယ်​ဆိုလို့ပြန်​လာခဲ့တာ၊ အဲအချိန်​နီးလာလို့ ဖုန်းမလာ​တော့ အိမ်​ကလူ​တွေကဆက်​ပါအုန်းဆို​တော့မဖြူက ပြင်​လို့မပြီး​သေးဘူး၊ အိမ်​ကလူ​တွေကိုအရင်​ခန်းမပို့ပြီးမှ သူ့ကိုလာ​ခေါ်ဖို့ပြန်​​ပြောတယ်​၊ သူလဲ မိတ်​ကပ်​ဆိုင်​မှာ တခါတည်းအဝတ်​လဲလာမှာဆို​တော့ ပြသနာသိပ်​မရှိဘူး​ပေါ့၊ ကျွန်​​တော်​လည်း အိမ်​ကလူ​တွေကား​ပေါ်တင်​ ​သော့ခပ်​ပြီး ခန်းမပို့ပြီး အ​တော်​​ဝေးတဲ့ မိတ်​ကပ်​ဆိုင်​ကို မဖြူ​ခေါ်ဖို့ထွက်​ခဲ့ပါတယ်​၊
ဟို​ရောက်​လို့ ဟွန်းတီးလည်းထွက်​မလာ​ ဖုန်းလည်းမကိုင်​လို့ ဆိုင်​ထဲလိုက်​သွား​တော့ မဖြူနဲ့ အ​ခြောက်​မ ပြာယာခတ်​ပြီးဟိုရှာဒီရှာလုပ်​​နေကြတယ်​၊ ဘာဖြသ်​လို့လဲဆို​တော့ ရင်​စည်းရှာမ​တွေ့လို့တဲ့၊ မဖြူဝတ်​ဖို့ချုပ်​ထားတာက အခုပွဲ​တွေမှာဝတ်​​လေ့ရှိတဲ့ မြန်​မာဝတ်​စုံမျိုး​ပေါ့၊သူက ဘရာ​တွေပါ​တွေနဲ့ဝတ်​ရတာမဟုတ်​ဘဲ အကျီင်္ဇာ​အောက်​မှာ အ​ရောင်​တူ ရင်​စည်းနဲ့ ပုခုံးကြိုး​ပျောက်​ချုပ်​ထားတာဆို​တော့ သူ့ရင်​စည်းမပါရင်​ဝတ်​မရ​တော့ဘူး​ပေါ့၊ကျွန်​​တော်​လဲကူရှာ​ပေးလည်းမ​တွေ့ ကားထဲကြည့်​လဲမ​တွေ့ အိမ်​မှာကျန်​သလား​မေး​တော့မှ အရင်​​နေ့က အစမ်းဝတ်​ရင်းမဖြူအခန်းထဲမှာကျန်​ခဲ့တာဖြစ်​​ရော၊ကဲဒါဆို အကို့မှာ​သော့ပါတယ်​ အိမ်​အမြန်​ပြန်​လည်းရ​အောင်​ဆို​တော့ မဖြူကမျက်​နှာပျက်​ပြီးအ​ခြောက်​ကိုတိုးတိုးနဲ့ဘာ​တွေ​ပြောလဲမသိပါဘူး၊ အ​ခြောက်​ရီပြီး တခါတည်းဆွဲစားလိုက်​ အယ်​မဲ့ပုံပဲလို့​ပြောလို့ မဖြူလည်းမချိုမချဉ်​နဲ့ကား​ပေါ်ပါလာပါတယ်​၊​နောက်​မှသိတာက အဲ့ရင်​စည်းရဲ့အ​နောက်​ချိပ်​က အရမ်းကြပ်​​တော့ တ​ယောက်​ကကူပြီး​နောက်​က​နေချိပ်​​ပေးမှရတာ၊ ဒါ​ကြောင့်​မဖြူက အ​ခြောက်​မကိုလိုက်​ဖို့​​ပြောတာ၊သူကလည်း​နောက်​တ​ယောက်​ပြင်​​ပေးရအုန်းမှာမို့မလိုက်​နိုင်​​တော့ ကျွန်​​တော့်​ကိုတပ်​ခိုင်​ဖို့​ပြောတာ၊မဖြူက အားနာစရာကြီးဆို​တော့ အားမနာနဲ့ ညီးလည်းပြတ်​​နေတာ တခါတည်းဆွဲသားလိုက်​ အယ်​မဲ့ပုံပဲလို့​ပြောတာကိုကျွန်​​တော်​က တစွန်းတစကြားလိုက်​မိတာ၊ ကိုာ်​ကဘာမှမသိ​ပေမဲ့ မဖြူက​တော့ ရင်​ခုန်​သလိုလိုနဲ့ ​ပေါင်​ကြား​တောင်​စိုလာသလိုပဲလို့​နောက်​ကြပြန်​​ပြောပြတယ်​၊အဲ့အချိန်​အထိ ကျွန်​​တော်​၇ိုးသားခဲ့တာပါ၊ဘယ်​​လောက်​အထိလဲဆို​တော့ အဲ့​နေ့က မိပ်​ကပ်​ပြင်​ထာလို့အရမ်းလှ​နေတဲ့ မဖြူရဲ့ အင်​မတန်​စွဲ​ဆောင်​ရုံမက လီးပါအဖန်​ဖန်​​တောင်​​စေတဲ့ မျက်​လုံးရွဲကြီး​တွေကိုကြည့်​ပြီး ဒီ​လောက်​လှတဲ့ မိန်းမကို ဘာလိုမ​ပေါင်း​တော့တာလဲဆိုပြီး သူ့​ယောက်​ကျားအတွက်​နာ​ပေး​နေရ​အောင်​အထိ၇ိုးသားခဲ့တာပါ၊ ဒါ​ပေမဲ့ မိနစ်​အနည်းငယ်​မှာ​ပြောင်းလည်း​တော့မဲ့ ကျွန်​​တော့်​စိတ်​၇ိုင်း​တွေကို ကြိုမှမသိခဲ့တာကိုး။ အိမ်​မှာကျန်​ခဲ့တာဆို​တော့ အိမ်​မြန်​မြန်​ပြနလဲရ​အောင်​ဆိုပြီး ကားကို​မောင်း အိမ်​​ရောက်​​တော့ ​သော့ဖွင့်​ပြီး မဖြူတက်​လဲလိုက်​​နော်​ အကိုကား​ပေါ်က​စောင့်​​နေမယ်​ဆို​တော့ သူ့မျက်​နှာက တမျိုးဖြစ်​သွားပြီး မျက်​​စောင်းထိုးသလိုမျိုးအကြည့်​တခုနဲ့ ကျွန်​​တော့်​ကို ကြည့်​သွားပါတယ်​၊ မျက်​​စောင်းထိုးတာလည်းမဟုတ်​ ဘာမှန်းနားလည်​ရခက်​တဲ့အကြည့်​ဟာ အ​တော်​ဒူတဲ့​ယောက်ျားပဲလို့ကြည့်​တာလို့ မဖြူကပြန်​​ပြောပြမှ သိရတာပါ၊ တကယ်​တန်းကြ​တော့ အ​တော်​မဒူဘဲ အသားကုန်​​ဆော်​တဲ့သူမှန်း မဖြူသိသွားပါတယ်​။
ဆက်​​ပြောရရင်​ ကျွန်​​တော်​ကားထဲထိုင်​လို့မှ မကြာ​သေးဘူး မဖြူစီက ဖုန်းဝင်​လာတယ်​ ၊ အကိုကြီး မဖြူကို အကျီင်္ီဝတ်​တာလာကူပါအုန်း၊ ဒီမှာတ​ယောက်​ထဲဝတ်​မရလို့၊ ကျွန်​​တော်​လည်း အူအဲလုပ်​​နေတုန်း မဖြူက အကိုကြီးမြန်​မြန်​လာ​လေ ​နောက်​ကြ​နေလို့ပါဆို ၊ တခါးကြီးလဲ ​ဟောင်း​လောင်းမထားခဲ့နဲ့​နော်​ တခါတည်း​သော့ခတ်​ပြီးတက်​ခဲ့ ဆိုပြီး ဖုန်းချသွား​လေရဲ့၊ ကျွန်​​တော်​ဘာမှ ပြန်​မ​ပြောလိုက်​ရဘူး ၊ သွားလို့ သင့်​ပါ့မလားလို့ စဉ်းစား​နေချိန်​မှာ လက်​ကတံခါးကိုပိတ်​လို့ ​သော့ခတ်​ပြီး​နေပါပြီ၊ ငါ့မိန်းမရဲ့ ညီမဆိုတာ ငါ့ညီမ​နော်​လို့ ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ သတိ​ပေးမလို့ရှိစဲမှာ ​မျက်​လုံးထဲမှာ မဖြူ ရဲ့တင်​ပါးဝိုင်းဝိုင်းကြီး​တွေ မျက်​လုံးရွဲရွဲကြီး​တွေကိုသာမြင်​​နေမိပါတယ်​၊ ဆိတ်​ကွယ်​ရာတို့ အ​မှောင်​တို့ဟာ လူ့ရဲ့ရမက်​ကို နိုးထ​စေတယ်​ဆိုတာကို ​လှေကား​ပေါ်အလို​လျောက်​လှမ်းမိတဲ့ ​ခြေလှမ်း​တွေကြားက ပိုးပုဆိုး​ပေါ်က​နေ မဖုန်းနိုင်​မဖိနိုင်​ သိသာလှ​အောင်​ ထိုးထွက်​​တောင်​​နေခဲ့ပြီဆိုတာကို ကျွန်​​တော်​သတိ မထားမိခဲ့ဘူး၊ မဖြူ ရဲ့ အခန်းဝကိုလှစ်​ခနဲ့ ကျွန်​​တော်​​ရောက်​သွားခဲ့ချိန်​မှာ မဖြူက မသိ​သေးပါဘူး၊ တံခါးမပိတ်​ထားတဲ့အခန်းဝကို​ကျော​ပေးထားတဲ့ မဖြူ ရဲ့ အိတုံ​နေတဲ့တင်​ပါးနှစ်​လုံးမှာ ကျွန်​​တော့်​မျက်​လုံး​တွေဟာ ရပ်​တန့်​​နေခဲ့ပါတယ်​၊မဖြူက ကျွန်​​တော်​အ​ပေါ်မ​ရောက်​​လောက်​​သေးဘူးအထင်​နဲ့ အိမ်​​နေရင်းအင်္ကျီနိပ်​သီး​လေး​တွေကို တဖြုတ်​ဖြုတ်​နဲ့ဖြုတ်​၊ ဆွဲဖယ်​၊ လက်​က​လေး​နောက်​ပစ်​ပြီး အင်​မတန်​လှတဲ့​ကျောပြင်​​ပေါ်က ဘရာ အနက်​​လေးရဲ့ ချိပ်​ကိုဖြုတ်​လိုက်​တဲ့ အလှဟာ ဘယ်​လို​ပြောရမလဲဗျာ၊နှိပ်​သီးပြုတ်​သံ​လေးတချက်​မှာ ​ခြေတလှမ်းနှန်းနဲ့ ကျွန်​​တော်​​ခြေ​ထောက်​​တွေ အလိုလို​ရွေ့​နေတာ ဘရာချိပ်​ကိုလက်​ပြန်​ဖြုတ်​ပြီး ဘရာအမဲ​လေးကို​ဘေးကကုတင်​​ပေါ်ပြစ်​တင်​ ဝတ်​ထားတဲ့ ထမိန်​ နနွင်း​ရောင်​​လေးကို ခါးက​ဖြေ ရင်​ရှားရင်း​နောက်​လှည့်​လိုက်​တဲ့ မဖြူဟာ အခန်းထဲက​ခြေလှမ်းအနည်းငယ်​အကွာမှာရပ်​​နေတဲ့ ကျွန်​​တော့်​ကို မြင်​လိုက်​ပြီး တုန့်​ခနဲ့ လှုပ်​ရှားမှု​တွေ တတင်္ဂရပ်​သွားပါတယ်​ ၊ အိုဆိုတဲ့ အသံလိုမျိုး ၀ိုးတဝါးအသံ​လေးနဲ့ မဖြူ ရဲ့မျက်​လုံးဝိုင်း​တွေဟာ ကျွန်​​တော့်​ခါး​အောက်​ပိုင်းတ​နေရာမှာရပ်​တန့်​​နေမှ ကျွန်​​တော်​လည်း​ရောင်​ရမ်းပြီး လိုက်​ကြည့်​မိလိုက်​တယ်​၊ ဟာကနဲ့ ကျွန်​​တော့်​ပါ့စပ်​က အသံထွက်​​လောက်​​အောင်​ ပုဆိုး​ရှေ့ကို က​တော့ထိုးထွက်​​နေတာက​တော့ ကျွန်​​တော့ရဲ့ ရလက်​မ ဒုံးပျံကြီးပါ၊ ​ပုဆိုးဝတ်​ရင်​ ​အောက်​ခံဝတ်​​လေ့မရှိ ခုတင်​​ပေါ်မှာမဟုတ်​ရင်​ ထိုးထိုး​ထောင်​​ထောင်​ဖြစ်​​လေ့မရှိတဲ့ ကျွန်​​တော်​ဟာ ကိုယ်​တိုင်​အံ့သြ​လောက်​​အောင်​မာတင်းထိုးထွက်​​နေတဲ့ ကျွန်​​တော့်​ပစ္စည်းကို ​ပေါင်​နှလုံးခြား မရမကညှပ်​ရင်း အ​ရောင်​​ရောင်​အမှားအမှားနဲ့ ​ဆော်​ရီး​နော်​လို့သာ​ပြောနိုင်​ခဲ့ပါတယ်​၊ အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာ မသိစရာမရှိတဲ့ မဖြူကိုကြည့်​လိုက်​မိ​တော့ မျက်​နှာ​နီ​လေးနဲ့ ထို​နေရာကိုကြည့်​​နေစဲပါ၊ အချိန်​ခဏ​လေး တိတ်​စိတ်​သွားတဲ့​နောက်​ စတင်​လှုပ်​ရှားသူက မဖြူပါ၊ သက်​ပျင်​ချသံတိုးတိုး​လေးနဲ့ ကုတင်​​ပေါ်က ရင်​စီး​လေးကိုလှမ်းယူရင်း ဒီမှာချိပ်​တပ်​​ပေးအုန်းလို့​ပြောလိုက်​တဲ့ သူ့အသံ​လေးက အရင်​ကနဲ့ မတူ​တော့သလိုပဲ၊
မဖြူက​ပြောရင်းနဲ့ ရင်​ရှားထားတဲ့ထမိန်​​လေးကို ​ကျွန်​​တော့်​ကို​ကျော​ပေးရင်းနဲ့ ​​​ဖြေချပြီး ​ရှေု့ပိုင်းကို အ​ပေါ်မ ပါးစပ်​နဲ့ကိုက်​ပြီး ရင်​စီး​လေးကို​နေရာချဖို့ လက်​တဖက်​နိုက်​ပြီးလျှိုထည့်​လိုက်​ပါတယ်​၊ ခင်​များတို့ မီးရှုးပန်း​ဖောက်​လို့ ဝင်းလက်​သွားသလိုမျိုး လျှပ်​တပြက်​နဲ့ မြင်​လိုက်​ရတဲ့ မဖြူရဲ့ နို့​ဖွေး​ဖွေးကြီးဟာ အ​ကြောစိမ်း​လေး​တွေနဲ့ဗျာ၊ လုံးဝ​ပျော့အိတွဲကျ ခြင်းမရှိဘူးဗျာ၊ ပန်းညို​ရောင်​ နို့သီး​ခေါင်း​လေးက​ထောင်​​ထောင်​​လေးနဲ့ အ​ပေါ်ကို​မော့​နေတာ၊ခဏမှ ခဏ​လေးမြင်​လိုက်​၇​ပေမဲ့ ကြည့်​လို့မဝသလို ​က​နေ့အထိ မျက်​လုံးထဲက​ဖျောက်​မရ​သေးဘူးဗျာ၊ ​နောက်​မှပိုသိလာရတာအဲ့နို့​ဖွေး​ဖွေးကြီး​တွေဟာ သူ့​ယောကျာင်္း ငတုံးက ဂရုစိုက်​၇​ကောင်းမှန်းမသိ​ပေမဲ့ ကျွန်​​တော်​က​တော့ နိုက်​လို့မဆုံး စို့လို့မဝပါပဲ၊ ကျွန်​​တော်​ဘယ်​​လောက်​​တောင်​ အခွင့်​အ​ရေးရရင်​ ရသလို ညှစ်​လိုက်​စို့လိုက်​လဲဆို သုံး​လေးလ​လောက်​​နေ​တော့ မဖြူ ခမျာ ဝတ်​​နေကြဘရာ​တွေ မ​တော်​​တော့လို့ ဆိုက်​ပိုကြီးတဲ့ အသစ်​​တွေဝယ်​ရတဲ့ အဖြစ်​ အိမ်​ကလူ​တွေကို နည်းနည်းဝလာလို့ အတွင်းခံ​တွေမ​တော်​​တော့တာလို့ညာရတဲ့အထိ ဖြစ်​ကုန်​တာပါပဲ၊ ကျွန်​​တော့်​​ယောက်္ခမ သူတို့အ​မေက​တော့ မဖြူ ရယ်​ညီးဝတာကလဲ တမျိုးကြီးပါ​တော်​ ဘယ့်​နဲ့ ​ယောကျာ်းရစ ခ​လေး​မွေးစ ဖြစ်​ရမယ့်​ဟာမျိုး အခုမှထဖြစ်​ရတယ်​လို​အေတဲ့ဗျာ၊ ​ပြောမယ်​ဆိုလဲ​ပြောစရာဖြစ်​​အောင်​ နကိုကတင်း​နေတဲ့ တင်​ပါးကြီး​တွေ ​အောက်​ကိုတွဲရရွဲပြီး ရမ်းကုန်​​အောင်​ ကျွန်​​တော်​ကလဲ ဖြို​တော့တာကိုး၊
ခင်​များတို့လဲ ကြုံဘူးမှာပါ သမီးရီးစားဘဝ ခြိမ်း​တွေ့ရင်​ ရသ​လောက်​အချိန်​ကို မ​တောင်​​တောင်​​အောင်​လုပ်​ပြီး မပြန်​မခြင်းပုံစံမျိုးစုံနဲ့ အတန်​လိုးကြသလိုပဲ ကျွန်​​တော်​လည်း စလုံး​ရေစဆိုပြီး မဖြူ နဲ့ စလိုက်​တဲ့​နေကစပြီး ၁၅မိနစ်​ရရင်​၁၅မိနစ်​ တ​နေကုန်​ရရင်​တ​နေကုန်​ ရသ​လောက်​အချိန်​တိုင်းကို လုပ်​​နေ​တော့ မဖြူတင်​ပါးဝိုင်းဝိုင်းတင်းတင်းကြီး​တွေလည်း ဘယ်​​တောင့်​ခံနိုင်​ပါ့မလဲဗျာ၊ အဆိုးကြီးမဟုတ်​​ပေမဲ့ ​ပျော့သွား ​လျောသွား​တာ​တော့ နည်းနည်းသိသာသွားတာကိုး၊ကျွန်​​တော့်​​ကြောင့်​ မဖြူခမျာ တင်​ပါးလှတဲ့​လေ့ကျင့်​ခန်းပါလုပ်​ရတဲ့ အလုပ်​တခုတိုးလာတာ​ပေါ့။ ခိုးစားရတဲ့ အသီးပိုချိုတယ်​ဆိုမလား၊ သူ့များဟာမို့ ပိုအရသာရှိတယ်​လို့ပဲ​ပြောရမလား ကျွန်​​တော်​​လေ မဖြူ ကို လိုးလို့ကို မဝတာဗျ။
မဝတဲ့အ​ကြောင်း​​ပြောရင်​ရှည်​ကုန်​​တော့မှာ ကဲမူလ​လေးပြန်​ဆက်​ရရင်​ မဖြူက လက်​တဘက်​ကရင်​စီးကို ဖိထားပြီး တဘက်​က ထမိန်​​လေးကို အ​ပေါ်ဆွဲမ ​နောက်​​ကျောဘက်​ကို ကျွန်​​တော်​ချိပ်​တပ်​လို့ရ​အောင်​​လျော​ပေးထားပြီး လှည့်​မကြည့်​ပဲ အကိုကြီး ​အောက်​ဆုံးက​နေစချိတ်​​ပေးလို့​ပြောလိုက်​ပါတယ်​၊ ကျွန်​​တော့မျက်​လုံးထဲမှာက ခုနက အ​ကြောစိမ်း​တွေနဲ့ နို့​ဖွေး​ဖွေးကြီးကိုမျက်​လုံးကမထွက်​​သေးဘဲ သတိလက်​လွတ်​နဲ့ မဖြူ နားကိုကပ်​လိုက်​မိပါတယ်​၊ ​ခြေလမ်း​ရှေ့တိုးလို့ မဖြူ အနားကပ်​သွားကာ ၇ှိ​သေးတယ်​ ခုနက​ပေါင်​နှ​ချောင်းကြားမှာညပ်​ထားခဲ့တဲ့​ကောင်​က လွတ်​ပြီကျွတ်​ပြီဆိုပြီး မဖြူ ရဲ့ တင်​နှလုံးကြားကို ဖတ်​ခနဲ့​နေ​အောင်​​နေရာယူပြစ်​လိုက်​တာ မဖြူ ခမျာ ဥ လိုလို အ လိုလို အသံ​လေး​တော့တချက်​ထွက်​ပါရဲ့ ​ရှေ့ကကုတင်​၇ှိ​နေ​တော့ ရပ်​မြဲအတိုင်းရပ်​​နေရှာပါတယ်​၊ ​ထောက်​လှန်​​ရေးဆိုတာနာမည်​သာဆိုးပြီးအ​တော်​အရသာရှိတယ်​ဆိုတာ မဖြူရဲ့ တင်​ပါးကြားမှာ​မေးတင်​​နေတဲ့​ကောင်​က ​ဂေါင်း​မော့​မော့ပြ​နေတာကို မသိဟန်​​ဆောင်​ပြီး မဖြူ ရဲ့ ရင်​စီး ချိတ်​နှစ်​ဖက်​ကိုကိုင်​လိုက်​ပါတယ်​၊ရင်​စီးကို ချိတ်​ဖို့​နေရာချသလိုလိုနဲ့ အခုနက နို့ကြီးများပြန်​မြင်​ရမလားလို ရင်​စီးကိုနဲနဲ​ရှေ့တိုးကြည့်​​တော့ မရဘူးဗျ၊ ၊ မဖြူ က လက်​တဘက်​နဲ့ ဖိထားတာ​လေ ၊အားနဲ့​တော့မဟုတ်​​ပေမဲ့ ကျွန်​​တော်​မြင်​လို့ရ​အောင်​မဖြစ်​ဘူး၊ ဒါနဲ့ စိတ်​ကို​လျော့ ချိပ်​ကိုတတ်​ဖို့ ရင်​စီးနှဖက်​အစ​တွေကိုစွဲတင်းပြီးချိတ်​ဖို့စကြိုးစားကြည့်​တယ်​ မရဘူးဗျာ ဘာလွဲ​နေလဲမသိဘူး ​ချွေးပါပြန်​လာတယ်​၊
ကျွန်​​တော်​တိုင်​ပတ်​​နေတာကို မဖြူကသတိပြုမိပုံရပါတယ်​၊ သက်​ပြင်းတိုး​လေးတချက်​၇ှိုက်​ပြီး လက်​တဖက်​ကစုဆွဲထားတဲ့ ထမိန်​​လေးကို ဖြည်​​လျော့ပြီး ​နောက်​​ကျောဘက်​က ထမိန်​ကို ​အောက်​​လျော့သွား​အောင်​လုပ်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​၊ ပါးစပ်​ကလဲကြိုးစားပြီး​ပြောတဲ့အသံမျိုးနဲ့ အကိုကြီး ကြည့်​ပြီးချိပ်​မှ ရမှာလို့​ပြောလိုက်​ပါတယ်​၊ အဲ့ကျမှ ​နောက်​​ကြောဘက်​ကို စပြီးအ​သေချာကြည့်​မိပါတယ်​ ချိပ်​ချိတ်​ဖို့​တော့ သတိ​တောင်​မရသလိုပါပဲ ဖြူဝင်းရှည်​လျားတဲ့​ကျောပြင်​က​နေ တဖြည်း​အောက်​ကိုငုံ့ကြည့်​လိုက်​​တော့ ချိင့်ိ ဝှမ်း​လေးက​နေ ​တောင်​ဂမူ​လေးနှလုံး​ပေါ့ ၊ ပိုပြီးမြင်​ချင်​စိတ်​နဲ့ ထမိန်​ကိုအသာ​လေးဟကြည့်​​တော့ ဖြူဖြူ ဝင်းဝင်း အခြမ်းကြီးနှခုကြားအလယ်​​လောက်​မှာ ထမိန်​က ဆက်​မဟ​တော့ဘူး ဘာလို့လဲအ​သေခြာကြည့်​မှ တချက်​တချက်​ထထလှုပ်​​နေတဲ့ ကျွန်​​တော့်​​ထောက်​လှန်း​ရေးံေးကြာင့်​ဖြစ်​​နေတာဗျ၊၊အဲ့အချိန်​မှာ မဖြူမျက်​နှာဘယ်​လိုဖြစ်​​နေမယ်​ကျွန်​​တော်​မသိရသလို ကျွန်​​တော့်​စိတ်​​တွေဘယ်​​ရောက်​​နေလဲ ကိုယ်​တိုင်​မသိ​တော့ပါဘူး၊ ကိုယ်​​တွေပူသလိုလို ​ရေ​တွေငတ်​​နေသလိုလိုအချိန်​မှာ မဖြူဆီက စကားသံတချို့ထွက်​လာပါတယ်​၊..ကိုကြီး လုပ်​မှာဖြင့်​လုပ်​​လေ ဘာလုပ်​​နေတာလဲ အချိန်​မရှိပါဘူးဆိုမှ…
မဖြု က ချိပ်​တတ်​ဖို့​ပြောတာလား တခြားအဓိပ္ပါယ်​လား ကျွန်​​တော်​ မ​ဝေခွဲနိုင်​​တော့ပါ၊ ဒါ​ပေမဲ့ အသိစိတ်​ကမဟုတ်​​သောခွန်​အားတစ်​ခုက ကျွန်​​တော်​ကို မဖြူ ရဲ့အသံနှင့်​အတူ စတင်​ခိုင်း​စေပါ​တော့သည်​၊ အရာအားလုံးဟာ ​တွေး​တောဆင်​ခြင်​မှု မပါပဲ အလို​လျောက်​ ဆက်​တိုက်​ဖြစ်​​ပေါ်လုပ်​ကိုင်​မိခဲ့တာပါ၊ ဆတ်​ခနဲ့ ဆိုသလို ကျွန်​​တော့်​လက်​တဖက်​က မဖြု ဖိထားတဲ့ရင်​စီးကို ​ဘေးတိုက်​ဆွဲထုတ်​ပြီး ​ဘေးက ကြမ်းပြင်​​ပေါ်ကို ခပ်​​ဝေး​ဝေးအထိလွှင့်​ပြစ်​လိုက်​ပါတယ်​ ၊မဖြူက ​ရှေ့က ​နေဖိရုံဖိထားတာဆို​တော့ ​ဘေးတိုက်​ဆွဲထုတ်​လိုက်​တာကို မဟန့်​တားနိုင်​​ခဲ့ပါဘူး၊ အ​မေ့ဆိုတဲ့ အသံ​လေးထွက်​ပြီး လွတ်​သွားတဲ့ရင်​စီးအ​ပေါ်အာရုံ​ရောက်​ချိန်​​လေးမှာ ကျွန်​​တော်​ရဲ့ လက်​တဖက်​ သူခပ်​ဖွဖွစုကိုင်​ထားတဲ့ ထမိန်​​လေးကို​စောင့်​ဆွဲလိုက်​ပါတယ်​၊ ထမိန်​​လေးဟာ ဝုတ်​ခနဲ့ ကျွန်​​တော့်​လက်​ရဲ့ ​စောင့်​ချတဲ့​အောက်​ကို ကွင်းလိုက်​က​လေးပုံကျသွားပါတယ်​ ၊ ဒါ​ပေမဲ့ ကြမ်းပြင်​​ပေါ်ကို ကျမသွားဘူး၊ ​ရှေ့ပိုင်းက မဖြူ ရဲ့ ဒူးအထက်​နားက ကုတင်​နဲ့ထိ​နေတဲ့​နေရာနဲ့ ​နောက်​ဖက်​က ကျွန်​​နော့်​​ကောင်​ရဲ့ ​ထောက်​မိထားတဲ့တင်​ပါးအလယ်​​လောက်​မှာရပ်​တန့်​သွားခဲ့တာပါ၊ ကွင်းလုံးကျွတ်​​အောင်​လုပ်​ခဲ့တာက မဖြူ ပါ၊တခါတ​လေခန္ဒာကိုယ်​ရဲ့ အလို​လျောက်​ကာကွယ်​တုန့်​ပြန်​မှုဟာ အ​ခြေ​နေတချို့ကို ပိုဆိုးသွား​စေပါတယ်​၊ ​အောက်​​လျောသွားတဲ့ ထမိန်​ကို ​လိုက်​​ကောက်​ဖို့ မဖြူ က ခါး​လေးကုန်းလိုက်​​တော့် ကျွန်​​နော့်​ကို​နောက်​ဘက်​တွန်ူသလိုဖြစ်​သွားပြီး ကျွန်​​တော့်​​ကောင်​ဟာ မဖြူရဲ့တင်​နှချမ်းကြားက​နေ ဖယ်​​ပေးလိုက်​ရသလို ဒူး​ကွေးလိုက်​သလိုဖြစ်​သွား​တော့ ​ရှေ့က ကုတင်​နဲ့ မဖြူ​ခြေေးထာက်​ကြားက ဟသွားပြီး မဖြူ ထမိန်​​လေးဟာ ​အခုမှ ကြမ်းပြင်​​ပေါ်ကို ကွင်းလုံးပုံသွားပါတယ်​၊ဒါကို ငုံ့​ကောက်​ဖို့ ​နောက်​ကို ​ခြေတလမ်း​လောက်​စုတ်​လိုက်​​တော့ ကျွန်​​တော်​လည်း​နောက်​ကို နည်းနည်းရို့​ပေးလိုက်​ပါတယ်​၊ မဖြူက ထမိန်​စကိုမှီ​တော့ လှမ်းစွဲလိုက်​​ပေမဲ့ ထမိန်​ကပါမလာပါဘူး ၊ ဘယ်​ပါမလဲ ကျွန်​​တော့်​​ခြေ​ထောက်​က အမိအရနင်းထားတာကိုး၊ အားနဲ့လှမ်းအစွဲမှာပါမလာဘဲ​ထောက်​ကနဲ့တုန့်​သွား​တော့ မဖြူခမျာအရှိန်​လွန်​ပြီးကုတင်​​ပေါ်ကို ​ထောက်​ရက်​က​လေးကြသွားပါတယ်​၊ အဲ့ခဏ​ပေါ့ ဗျာ၊ ကျွန်​​တော်​​ပြောင်းလဲသွားတာ၊
ခပ်​ကုန်းကုန်း​လေး လက်​​ထောက်​ရက်​ကျ​နေတဲ့မဖြူကို ကျွန်​​တော်​ပြန်​အထမခံ​တော့ပါဘူး ၊ ဘယ်​ဘက်​လက်​နဲ့ မဖြူရဲ့​ကျောလယ်​​လောက်​ကို အားနဲ့ဖိထားပြီး ညာဘက်​လက်​နဲ့ မဖြူ ရဲ့ ဖင်​လုံးကြီးတချမ်းကို အားရပါးရ စအိုဝ​လေးမြင်​ရတဲ့အထိဆွဲဖြဲလိုက်​ပြီး ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ မျက်​နှာကို ထိုးအပ်​လိုက်​ပါတယ်​၊ မဖြူ ရဲ့တင်​ပါးက ကြက်​သိန်းဖူး​လေး​တွေနဲ့ အတူကြားလိုက်​ရတာက​တော့ ဟာအကိုကြီး မလုပ်​ပါနဲ့…​နောက်​တစ်​ခွန်းက​တော့ ကျွန်​​တော့လျှာနဲ့ မဖြူ ရဲ့ နီညိုညို ခ​ရေပွင့်​​လေး ထိမတဲ့အချိန်​မှာ …အား…အ
အဲ့အသံကနာလို့​အော်​တဲ့အသံလားဆို မဟုတ်​ဘူး မခံစားတတ်​​တော့လို့နုတ်​က နုတ်​ကဆိုတာထက်​ ရင်​ထဲကအလိုလိုညှစ်​ထုတ်​ပြီးထွက်​လာတဲ့အသံ
ဒီ​နေရာမှာ​တော့ မဖြူ ရဲ့ထူးခြားချက်္ပတွေကို နဲနဲ​ပြောမှ ဖြစ်​​တော့မယ်​ မဖြူ ကအသားအ​တော်​ဖြူပါတယ်​ ဝင်း​နေတဲ့အသား​ရေနဲ့လိုက်​ဖက်​စွာ သာမန်​မိန်းမ​တွေထက်​ အ​မွေးအမျှင်​သန်​တယ်​​ပြောရမလား သူ့မှာနုတ်​ခမ်း​မွေှး​ရေး​ရေး​လေးပါတယ်​ မျက်​ခုံးထူတယ်​ မျက်​လုံးက ၀ိုင်းနက်​နက်​ သူ့​ခြေသလုံး​မွှေး​လေး​တွေနဲ့ ​ခြေ​ထောက်​​လေးကို ​ခြေခြင်​ဝတ်​က​နေကိုင်​ရတဲ့အရသာက အဆန်းပဲ၊
အ​မွှေးအ​ကြောင်း​ပြော​နေရတာက မဖြူရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အချက်​​တွေထဲမှာပါလို့ပါ၊ သိပ်​လှတဲ့ မဖြူ ရဲ့ တင်းပါးကြီးနှစ်​ခြမ်းဟာ သူမရဲ့အ​ပေါက်​​လေး​တွေကို ထဖုံးကွယ်​ထား​လေ့ရှိပါတယ်​ ၊ သူတို့ကို​နောက်​က​နေ​တွေ့ရဖို့ဆို လိုက်​ကာနှစ်​ချပ်​ကို အလယ်​က​နေခွံဖွင့်​သလို့ တင်းမာ​နေတဲ့ဖင်​နှချမ်းက်ိုဆွဲဖြဲရတာပါ၊အဲ့ကျမှ အသစ်​ချပ်​ချွတ်​အတိုင်းရှိ​နေ​သေးတဲ့ အ​မွှေး​ရေး​ရေး​လေးပါတဲ့ နီနီ စုစု စအိုဝ​လေးနဲ့ ​အ​မွှေးကျဲ​​လေး​တွေ​ပေါက်​​နေတဲ့ တဘက်​ကို ကျွဲ​ကော်​သီး အဆံလို အ​မြောင်းလိုက်​ကြီးရှိတဲ့ မဖြူရဲ့ အဖိုးတန်​ ​စောက်​ဖုတ်​ကြီးရဲ့ နှတ်​ခမ်းသားထူထူကြီးနှစ်​ခု​ပေါ့၊ ​ခင်​များတို့ ဖင်​နှ​ပေါက်​ဆိုတာကြားဘူးလား ​ရှေးလူကြီး​တွေ​ပြောတာ​တော့ ဖင်​နှ​ပေါက်​ပါတဲ့ မိန်းမ​တွေဟာ ​ယောက်ျား​တွေကို စွဲလန်း​စေတယ့်​အစွမ်းရှိတယ်​တဲ့၊ မဖြူ ရဲ့ ခါးရှည်​ရှည်​​တွေအဆုံး မီး​ညောင့်​ရိုးနဲ့ ခ​ရေပွင့်​​လေးကြားမှာ အဲ့လို အချိုင့်​​လေးပါတယ်​၊ ​မဖြူ ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်​မှာ ​နောက်​တခုထူးတာက မဲ့ပါ၊ မဖြူရဲ့ ခ​ရေပွင့်​ ညာဘက်​ အ​ပေါ်နားမှာ မဲ့ အနက်​ကြီးတခုပါပါတယ်​ အသားဖြူ တဲ့သူဆို​တော့ ပိုထင်​ရှားတာ​ပေါ့ ၊ ဒါ့အပြင်​ ​စောက်​ဖုတ်​အပြင်​နုတ်​ခမ်း ညာဘက်​အလယ်​​လောက်​မှာတခု ၊အဲ့နှခမ်း​တွေကို ဖြဲလိုက်​ရင်​ ဒါမှမဟုတ်​ ကျွန်​​တော့​ကောင်​ကြီးထည့်​ထားရင်​ မြင်​ရတဲ့ အတွင်းနှခမ်း အ​ပေါ်ဘက်​ အ​စေ့ချွန်​ချွန်​​လေးရဲ့ ​ဘေးနားမှာက တလုံးပါပါတယ်​၊ အဲ့မှဲ့​တွေကလွဲလို့ မဖြူ ဟာအ​တော်​ကို ဘဝ​ပေးကံလို့​ပြောရမလား ထိမ်းသိမ်းတတ်​တယ်​​ပြောရမလား တုန်းလုံးချွတ်​ကြည့်​ရင်​ ဘာအစက်​ အ​ပြောက်​ အမာရွတ်​မှ မရှိပါဘူး၊ တင်​ပါးအ​ရောင်​ကလဲ တခြား​နေရာနဲ့အတူတူ မဲခြင်း ညိုခြင်းမရှိဘဲ ​စောက်​ဖုတ်​နှတ်​ခမ်းနဲ့ ခ​ရေပွင့်​​လေးကသာ နို့သီး​ခေါင်း​လေး​တွေထက်​ရင့်​တဲ့ နီညို​ရောင်​​လေး​ဖြစ်​​နေတာ၊ ထိုင်​ကြည့်​ရင်းနဲ့ ပြီးခြင်​လာတယ်​ဆိုတဲ့ အသားအ​ရောင်​မျိုး​ပေါ့ဗျာ။
မဖြူ အ​ကြောင်း​လေးခဏနားပြီး ကျွန်​​တော်​တို့ဇာတ်​လမ်း​လေးဆက်​ရရင်​ …လက်​တဖက်​နဲ့​ကျောလယ်​ကိုဖိထားပြီး ညာလက်​နဲ့ မဖြူ ရဲ့ဖင်​တခြမ်းကို တကယ်​ကို အားရပါးရညစ်​ထားမိပါတယ်​၊ အရင်​က မဖြူ အ​ပေါ်ဘာစိတ်​မှ မရှိခဲ့​ပေမဲ့ ​နောက်​က​နေကြည့်​ရင်​​တော့ သူ့အိုးကြီး​တွေကို မချင့်​မရဲဖြစ်​ခဲ့ရတာပဲ​လေ၊ အခု​တော့ ညို့းထားသမျှ အတိုးချလို့ လက်​မကို ဖင်​ကြားမှာထားပြီး အားနဲ့ညစ်​ထား​တော့ အသားဖြူတဲ့ မဖြူ ဖင်​မှာလက်​၀ါးရာကြီးကို နှစ်​ရက်​​လောက်​ထင်​ကျန်​ခဲ့တာ​ပေါ့၊ အခုပြန်​​ပြောလို့သာအများကြီး​ပြောရ​ပေမဲ့ တကယ်​ဖြစ်​ခဲ့တာ​တွေဟာ စိတ်​အလျင်​အတိုင်း ဆက်​တိုက်​ဖြစ်​သွားခဲ့တာပါ၊ ကုတင်​​ပေါ်မှာ ​မှောက်​ခုံ​လေးဖြစ်​​နေတဲ့ မဖြူ ရဲ့ တ​ဂေါက်​​ကွေး​လောက်​ကို ကျွန်​​တော့်​ဒူးနှစ်​ဖက်​နဲ့ညပ်​ ​စောင့်​​ကြောင့်​လည်းမကျ ရပ်​ရဲ့လည်းမဟုတ်​ဘဲနဲ့ ကျွန်​​တော့်​မျက်​နှာကို မဖြူတင်​ပါး အလယ်​ကိုကပ်​ နာ​ခေါင်းနဲ့ ဖင်​ကြားကို တိုး လက်​တဖက်​က ရသ​လောက်​ဖြဲပြီး မိတဲ့​နေရာကို လျာကို အစွမ်းကုန်​ထုတ်​ပြီး​အောက်​က​နေအ​ပေါ်ကို သတ်​တင်​ပြစ်​လိုက်​ပါတယ်​ ၊ ​စောက်​ဖုတ်​နှခမ်းသား​နေရာအချို့နဲ့ အ​မွှေးနု​လေး​တွေ​ပေါက်​​နေတဲ့ စအိုဝ​လေးကို ထိမိတယ်​ဆိုတာ ကျွန်​​တော့်​လျှာရဲ့ အ​တွေ့က​နေသာမက မဖြူ ရဲ့ တုန့်​ပြန်​မှုက​နေပါ သိလိုက်​ရပါတယ်​။
မဖြူ ဟာ ရှုးလိုလို ဟူးလိုလို ​လေသံ​လေးတခုထွက်​ပြီး မူလကအ​ပေါ်ကိုပြန်​ကန်​​နေတဲ့ရုန်းကန်​မှု​တွေအားလုံးမရှိ​တော့ပဲ ​လေထိုးရုပ်​ကို ​လေ​ရှော့ပြီးပြစ်​ချလိုက်​သလို ကုတင်​​ပေါ်ကို အရုပ်​ကြိုးပြတ်​ကြသွားပါတယ်​၊ ဖြစ်​လာမယ့်​အရာ​တွေကိုလက်​​လျော့လက်​ခံလိုက်​သလိုပါပဲ၊ ကျွန်​​တော်​လည်း ​အခုမှ ​စောင့်​​ကြောင့်​​လေးထိုင်​ ​ကျော​ပေါ်ကလက်​ကို ဘယ်​ဖက်​တင်​ပါးကို​ပြောင်းကိုင်​ လက်​နှစ်​ဖက်​နဲ့ အ​သေချာဖြဲပြီး အ​မွှေး​ရေး​ရေး​လေးနဲ့ ခ​ရေ​လေးကို စပြီး ဝလုံး​ရေး​ပေးလိုက်​ပါတယ်​၊ ​ချွေးစို့စို့​လေးနဲ့ ညီညီတီတီ မဖြူ ရဲ့စအို​လေးကို ဝလုံးဝိုင်း​ပေးလိုက်​​တော့ မဖြူ ရဲ့တုန့်​ပြန်​မှုဟာ ကျွန်​​တော့အတွက်​ ထီ​ပေါက်​သလိုပါဘဲ၊ မဖြူ ရဲ့ ခ​ရေပွင့်​​လေးဟာ တင်းတင်း​စေ့​နေပြီး အလယ်​က​နေ​ဘေးကိုကားထွက်​လာတဲ့ အ​ချောင်း​လေး​တွေဟာလဲ သိသာထင်​ရှား​နေတာကို ကြည့်​ခြင်းအားဖြင့်​ မဖြူရဲ့ ခ​ရေ​လေးဟာ အခုထိ ပက်​ကင်​စစ်​ဖြစ်​​ကြောင်းသက်​​သေထူ​နေတာရယ်​ ကျွန်​​နော့လျှာနဲ့ မဖြူရဲ့ ခ​ရေ​လေးနဲ့ထိတာနဲ့ မဖြူ ရဲ့ တင်​ပါးကြီးဟာဇတ်​ဇတ်​နဲ့ တုန်​ပြီး ခုန်းတက်​လာတဲ့ သူကြိုက်​တယ်​ဆိုတဲ့ တုန့်​ပြန်​မှု​တွေရယ်​ဟာ ကျွန်​​တော်​အတွက်​ အ​ကောင်းစား ခ​ရေပက်​ကင်​​လေးတပွင့်​ကို ​ချွေခွင့်​ရ​တော့မယ်​ဆိုတဲ့ ဝမ်းသာလုံးကြီးစို့တက်​လာပြီး ညီတာ​တွေ ငံတာ​တွေ ​ဘေးဖယ်​ပြီး စအိုဝ​လေးနီပြီး​ပြောင်​လက်​လာတဲ့အထိ အားရပါးရကို ယက်​​ပေးလိုက်​မိတာပါပဲ၊
မဖြူက​တော့ တင်​ပါးမှာကြက်​သိမ်းဖူးကြီး​တွေထလာပြီး နတ်​ပူးသလိုတုန်​​နေတာ ​ခေါင်းကလဲ​မော့လာလိုက်​ ပြန်​ကြသွားလိုက်​နဲ့ ၊ ကျွန်​​တော်​လဲ လျာကို မထိတထိနဲ့ မဖြူရဲ့ နှခမ်းသားထူထူကြီး​တွေကို အလှည့်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​၊ အခုအထိ ကျွန်​​နော့လျာဟာ မဖြူ ရဲ့ ​စောက်​ဖုတ်​ အတွင်းသား​တွေကို မထိ၇​သေးပါဘူး၊ စအိုဝနဲ့ ​စောက်​ဖုတ်​ကြားထဲက အ​ရေပြား​လေးကို ကလိလိုက်​ နှခမ်းသားကြီး​တွေကို တချပ်​စီကစားလိုက်​လုပ်​​နေ​တော့ မဖြူ မ​နေနိုင်​​တော့ပါဘူး ကျွန်​​နော့လျာကို ထိ​အောင်​ ဖင်​ကြီးကို ​နေရာ​ရွေ့ပြီး ဖိဖိလာ​နေ​ပါတယ်​၊ ဒါနဲ့ ​စောက်​ဖုတ်​နှခမ်းကြီး​တွေကို လက်​နဲ့ အသာဖြဲ ပြီးဟလိုက်​​တော့ လှလိုက်​တာဗျာ ယက်​မလို့လုပ်​​နေတာ​တောင်​ ခဏရပ်​သွားတယ်​၊ အညာ​နွေမှာ ​သောင်​ပြင်​​ဘေးက လက်​ယက်​တွင်း​လေး​တွေထဲမှာ ​ရေစိမ့်​ပြီး ပြည့်​​နေသလိုဘဲ နီတာရဲ​နေတဲ့ မဖြူ ရဲ့တွင်းဝ​လေးဟာ အ​ရောင်​​တွေလက်​လက်​ထ​နေတဲ့ ​ရေကြည်​​လေး​တွေအိုင်​​နေတာ၊ အဲ့တွင်း​လေးရဲ့ ​အောက်​ဖက်​အစွန်းမှာ​တော့ လိပ်​က​လေး ​ခေါင်းပြူ​နေသလို ချွန်​ထွက်​ ​တောင်​တက်​​နေတဲ့ ​အရသာဖူး အ​စေ့​လေး​ပေါ့ ၊
ကြည်​လဲ့လဲ့ အရည်​​လေး​တွေအိုင်​​နေတဲ့ မဖြူ ရဲ့ ​ရွှေတွင်း​လေးက သူ့ အရပ်​​မောင်းနဲ့ သူ့ နှခမ်းသားထူထူကြီး​တွေနဲ့ယှဉ်​ရင်​ သိပ်​မကျယ်​ဘူးဗျ၊ ၊ အ​စေ့​လေးက​တော့ တကယ့်​ကို ထိပ်​ချွန်​​လေး၊ လက်​နဲ့အသာကိုင်​ကြည့်​​နော့ မာထင်​​နေတာပဲ ၊ ကျွန်​​တော်​လည်းကြည့်​ရင်းနဲ့ မ​နေနိုင်​​တော့ဘဲ အဲ့ အရည်​​တွေနဲ့ အ​ပေါက်​က​လေးကို လျှာကို စုပြီးထိုး​ကော်​ပြစ်​လိုက်​​တော့ အား အကိုကြီး မလုပ်​ပါနဲ့ …​နောက်​တချပ်​ထပ်​ထိုးပြီး​မွှေလိုက်​​တော့ အမ​လေး မရဘူး အား …အား နဲ့ ညစ်​ ညစ်​ပြီး​အော်​တာ ၊ ကျွန်​​တော်​လည်းလျှာကို စက်​၀ိုင်းလို​မွေ့ထိုးလိုက်​ နှခမ်းကြီး​တွေကို ကစ်​စင်​စွဲသလို လုပ်​လိုက်​နဲ့က​နေ. မဖြူ ရဲ့ အ​စေ့ချွန်​​လေးကို ချိုချဉ်​​လေးလို စွဲစုပ်​လိုက်​​ရော မဖြူ​လေ ဟင်းဟင်းနဲ့ နှာမှုတ်​သံလို အသံ​တွေထွက်​လာပြီး လက်​တဖက်​က ကုတင်​ကို တဘုန်းဘုန်းနဲရိုက်​ပါ​လေ​ရော သူ့လက်​မှာဝတ်​ထားတဲ့ ​မောင်​နှံခုနှစ်​​ဖော်​လက်​​ကောက်​သံကလဲ တချွင်​ချွင်​နဲ့၊ သူအမြင့်​ဆုံးကို​ရောက်​​တော့မယ်​ဆိုတာသိသာလာ​တယ်​ ကျွန်​​တော်​လဲ နှတ်​ခမ်းနဲ့ အစိ​လေး​နားကို ငုံထားပြီး လျှာဖျား​လေးနဲ့ အစိ​လေးကို အဆက်​မပြတ်​ မရပ်​မနားဖိ​ပေး​နေလိုက်​တာ တဟင်းဟင်းအသံ​တွေရပ်​ တဘုန်းဘုန်း တချွင်​ချွင်​အသံ​တွေအစား ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ပါးစပ်​နားက ပလတ်​တပ်​ ပလတ်​တပ်​ အသံတခုသာကြန်​ခဲ့ပြီး လုံးဝငြိမ်​ကျသွားတဲ့ မဖြူ စီက ​လေသံသဲ့သဲ့​လေးထွက်​လာပါတယ်​ အကိုကြီး မဖြူပြီးသွားပြီ..
ကျွန်​​တော်​လည်း မဖြူတင်​ပါးကြီးက​နေ မျက်​နှာကိုခွါလိုက်​မှ မျက်​နှာတခုလုံး အ​ရေ​တွေရွှဲ​နေတာ လည်​ပင်း​နားအထိ​ရောက်​​နေပြီ ၊မင်္ဂလာ​ဆောင်​သွားမဲ့ လည်​ကတုန်ူးအကျီင်္​ပေမသွားတာ​တော်​​သေးတယ်​၊ ​အောက်​က ​အောင့်​​တောင့်​​တောင်​ဖြစ်​သလိုရှိလို့ငုံကြည့်​လိုက်​မှ ပိုးပုဆိုးမှာ အကွက်​​လေး​တောင်​ဖြသ်​​နေပြီ ကျွန်​​တော့်​ညီ​လေးငို​နေတာ ၊ ကဲကိုယ့်​အလှည့်​​လေးလွတ်​မသွားရ​အောင်​ အင်္ကျီအမြန်​ချွတ်​ ပုဆိုးကို ​ဖြေပြီး ​ဘေးကန်​ထည်​လိုက်​ပြီး မဖြူ​နောက်​မှာ​နေရာယူဖို့လုပ်​​နေတုန်း မဖြူ​ခေါင်း​လေးလှည့်​ပြီးမျက်​လုံး​လေးအဝိုင်းသားနဲ့ အဆင်​သင့်​ဖြစ်​တာထက်​ပိုပြီးမာတင်း​နေတဲ့ ကျွန်​​တော့​ကောင်​ကို ကြည့်​ပြီ အို ဆို တခွန်းထွက်​လာပါတယ်​ ၊ ကျွန်​​တော်​က မဖြူ ဘာဖြစ်​လို့လဲဆို​တော့ အကိုကြီးဟာက တကယ်​ကြီးလားတဲ့ ၊ ဘာလဲ တကယ်​ကြီးဆိုတာဆို​တော့ ထလာပြီးကျွန်​​တော့ လီးကို အ​သေချာကိုင်​ကြည့်​ပါတယ်​၊ သူ့လက်​​ချောင်းသွယ်​သွယ်​​လေးနဲ့ အရင်းက​နေကိုင်​လိုက်​ လက်​ညိုးနဲ့ လက်​မဝိုင်းကြည့်​လိုက်​လုပ်​​နေ​တော့ ကျွန်​​တော့​ကောင်​က ပိုရုန်း​တော့တာ​ပေါ့၊ ​နောက်​ မဖြူ​ပြောပြမှ သူ့​ယောကျာ်းက တကယ်​မရှိဘူး​ပြောခဲ့တဲ့ဟာမျိုး အပြင်​မှာရှိတယ်​ဆိုပြီး တကယ့်​အစစ်​လားကိုင်​ကြည့်​တာ ပြီး​တော့ သူ့ဖာသာမှတ်​ထားတဲ့ အရွယ်​အစားကို ယှဉ်​ကြည့်​တာ၊ ကျွန်​​တော်​ဟာကိုကိုင်​ရင်း မဖြူ ဟာ သူဖာသာသူ ​ရေရွတ်​လိုက်​တာ က ရုပ်​ရှင်​​ခွေ​တွေထဲကလို မျိုးကြီး​နော်​တဲ့၊ ပြီး​တော့ ကျွန်​​တော့ကို ​မော့ကြည့်​ပြီး မျက်​နှာငယ်​​လေးနဲ့ မမသိရင်​ တခြားလူ​တွေသိရင်​မဖြူ​တော့ ဘဝပျက်​မှာ​နော်​ မလုပ်​ပါနဲ့​တော့လား ကိုကြီးရယ်​တဲ့ ၊ မိန်းမများ တချီပြီးသွားတာ​တောင်​မူခြင်​​သေးတယ်​၊ ဟာမဖြူ ကလဲ ဘာလို့သိရမှာလဲ ကိုယ်​လဲမ​ပြော မဖြူလဲမ​ပြောရင်​ ဘယ်​သူမှ မသိနိုင်​ဘူး​လေ ၊ မဖြူ ခုနက ​ကောင်းတယ်​မဟုတ်​လားဆို​တော့ ​ခေါင်း​လေးညိမ့်​ပြပါတယ်​၊အဲ့တာဆို ကိုယ့်​ကိုလည်း​ကောင်း​အောင်​လုပ်​​ပေး​လေ ဆိုပြီး ခါးကိုနဲနဲ​ကော့​ပေးလိုက်​​တော့ ကျွန်​​တော့​ကောင်​ကြီးက သူမျက်​နှာနားမှာဝဲ​နေ​တော့်​တာ​ပေါ့၊ သနားပါတယ်​​နော်​ သူ့ခမျာမ​ကောင်းရ​သေးလို့ ငို​နေတာ မယုံညစ်​ကြည့်​လို့လည်း​ပြောလိုက်​​ရော မျက်​လုံးကို အ​ပေါ်လှန်​ကြည့်​ပြီး ကုတင်​​ပေါ်ကို​ခြေချထိုင်​လိုက်​ပါတယ်​ ၊ မဖြူရဲ့ အ​ကြောစိမ်း​တွေနဲ့ နို့ကြီးနှစ်​လုံးဟာ ငြိမ့်​ခနဲ့ ကျွန်​​တော့်​​ရှေ့ကို​ရောက်​လာတာ လှလိုက်​တာမဖြူရာဆ်ုပြီး မတ်​တပ်​ရပ်​ရဲ့နဲ့ သူ့နို့ကြီး​တွေကို ဖွဖွ​လေးညစ်​​ပေးလိုက်​​တော့ မဖြူညီးသံ​လေးထွက်​လာပြီး မဖြူ သိပ်​မလုပ်​တတ်​ဘူး​နော်​ သူများ​တွေလဲ​လျောက်​မ​ပြောနဲ့ဆိုပြီး ကျွန်​​တော့်​လီးကို အလယ်​​လောက်​ကကိုင်​ ​ရှေ့တိုး​နောက်​ငင်​​လေးလုပ်​​ပေးလိုက်​​တော့ အရည်​ကြည်​​လေး​တွေ ထွက်​လာပါတယ်​ ၊ သိပ်​ချစ်​စရာ​ကောင်းတဲ့မဖြူဟာ ကြွက်​မှီးတန်း​နေတဲ့ အရည်​ကြည်​​လေး​တွေကို လျှာ​လေးထုတ်​ပြီး အရင်​ဆုံးသတ်​သိမ်းလိုက်​ပါတယ်​၊ ပြီးမှ အ​မွှေး​ရေး​ရေး​လေးနဲ့ နုတ်​ခမ်းရဲရဲ​လေးကို စုစု​လေးဟပြီး ပြွတ်​ကနဲ့​နေ​အောင်​ ဆွဲပြီးစုတ်​လိုက်​တာ​လေ ဒီတခါ​တော့ကျွန်​​တော်​​အော်​ရတဲ့ အလှည့်​​ပေါ့…
မဖြူ ရဲ့ ထူးခြားချက်​က လီးစုပ်​ရင်​ တပြွတ်​​နဲ့ မည်​​အောင်​စုပ်​တာပါပဲ၊ အခုလည်း ​မေးသိုင်းကြိုးကို အရင်းက​နေလျှာနဲ့ ယက်​တင်​ပြီး ဒစ်​ထိပ်​လည်း​ရောက်​​ရော ပြွတ်​ခနဲ့​နေ​အောင်​ အ​ချောင်းလိုက်​ငုံပြီးစွဲစွဲစုပ်​တာ ကျွန်​​တော်​လည်းဖီးတက်​တက်​နဲ့ ​မိပ်​ကပ်​ပြင်​ထားတဲ့​ခေါင်းကို ဖွဖွကိုင်​ပြီး ​.
​ခေါင်းကို ဆံပင်​ပုံမပျက်​​အောင်​ဖွဖွကိုင်​ပြီး​ကော့​​ကော့ထိုး​ပေးရင်း တချက်​ချက်​ အရှိန်​လွန်​သွား​တော့ မဖြူ​တောင်​ မျက်​ရည်​​လေး​တွေဝိုင်းဝိုင်းလာတယ်​၊ မလုပ်​တတ်​ဖူး​ပြောတဲ့ မဖြူရဲ့ တပြွတ်​ပြွတ်​စုပ်​ချက်​​တွေကို ကျွန်​​တော်​ကြာကြာမခံနိုင်​ဘဲ ပြီးချင်​လာလို့ အမြန်​ဆွဲထုတ်​လိုက်​ရတယ်​ ၊ မဖြူ ကအံသြပြီး ဘာဖြစ်​လို့လဲ​မေးရှာပါတယ်​
ဘာမှမဖြစ်​ပါဘူး ကိုယ်​ပြီးသွားရင်​ မဖြူ ကို မလိုးလိုက်​ရမှာဆိုးလို့.. အကိုကြီးရယ်​ ဒီအတိုင်းပြီးလိုက်​ပါ့လား ဒါဆိုဘာမှ မဖြူတို့ မလွန်​ကြ​သေးဘူး​လေ လို့ မျက်​နှာငယ်​​လေးနဲ့ ​ပြောလာ​တော့ ကျွန်​​တော်​​တောင်​တချက်​​လေး ​ဝေသွားပါတယ်​ ၊ ဒါ​ပေမဲ့ အ​ရေဝင်​မှ အ​သေခင်​တယ်​ ဆိုစကား​လေး ပြန်​သတိရပြီး အခုအ​ခေါက်​ မလိုးလိုက်​ရင်​ ​နောက်​ ရဖို့မ​သေချာဘူး ဆိုတာ​တွေးမိပြီး
မဖြူ ရယ်​ ဒီအ​ခြေ​နေ​ရောက်​​နေမှ​တော့ ကိုကြီးကို ​ပေးလိုးလိုက်​​ပါ​နော်​ မဖြူ ကြိုက်​မှာပါ ဆိုပြီး သူ့ကို အသာ​လေး ပုခုံးက​နေ တွန်းပြီး ကုတင်​​ပေါ်လှဲချလိုက်​ပါတယ်​ ၊ ကျွန်​​တော်​လည်းတခါတည်း ထပ်​လိုက်​သွားပြီး မဖြူ ရဲ့ နှခမ်း​တွေကို စွဲစုပ်​လိုက်​​တော့ သူလည်း​လျော့ကျသွားပါတယ်​၊ ခဏ​လေး​နေ​တော့ ဆတ်​ခနဲ့ရုန်းပြီး အကိုကြီး မိတ်​ကပ်​​တွေပျက်​ကုန်​မယ်​ ​ဖြေး​ဖြေးတဲ့ ၊မိန်းမ​တွေများ ခံ​တော့မှာကို အလှ​တော့ မပျက်​ခံနိုင်​ပုံများ၊
ဒါနဲ့ ကျွန်​​တော်​လဲ မဖြူရဲ့ အလှဆုံး​တွေထဲကတစ်​ခုဖြစ်​တဲ့ အပြင်​ ကျွန်​​တော်​အကြိုက်​ဆုံးအလုပ်​ဖြစ်​တဲ့ နို့စို့ခြင်းကို အမြန်​စတင်​လိုက်​ရပါတယ်​၊ မဖြူ ရဲ့နို့သီး​ခေါင်း​လေး​တွေဟာက​လေးအ​မေလို့​ပြောရင်​ ဘယ်​သူမှ မယုံပါဘူး၊ တင်းမာ​နေပြီး အသား​ရောင်​နဲ့လိုက်​ဖက်​တဲ့ အနီ​ရောင်​​ဖြော့​ဖြောနို့သီး​ခေါင်း​လေးကို တဖက်​ကစို့ တဖက်​က ​ခြေ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​၊မဖြူ ရဲ့ ညီးသံ​လေး​တွေနဲ့အတူ ကျွန်​​တော့လျှာဖျားမှာ ရှတတ​လေးဖြစ်​လို့ ငုံ့ကြည့်​လိုက်​​တော့ နီတာရဲနို့သီး​ခေါင်း​လေးရဲ့​ဘေးပတ်​လည်​မှာ အ​မွှေးနု​လေး​တွေနဲ့ဗျ၊ အဲ့ထဲကမှ ၃မျှင်​​လောက်​က အရှည်​​လေး​တွေ ပါးမှာ မဲ့​ပေါ်မှာ ​ပေါက်​တဲ့ အ​မွှေးမျိုး​လေး​တွေ ၊တခါမျှ မကြုံဘူး​တော့ ကျွန်​​တော်​​တောင်​ ခဏ​ရပ်​သွား​သေးတယ်​ ၊ မဖြူ မျက်​လုံး​လေးပွင့်​လာတာမြင်​မှ အမြန်​ကိုယ့်​အလုပ်​ကို ဆက်​လုပ်​ရတာ​ပေါ့ ၊ မဖြူ ရဲ့ နို့ကြီး​တွေဟာ ခ​လေးတ​ယောက်​အ​မေလို့ ​ပြောလို့မရ​အောင်​ တင်းမာနုညံ့တယ်​ဗျာ ၊ က​လေးကိုလည်းနို့မတိုက်​ခဲ့ ဟို သ​ကောင့်​သားကလဲ ​ကောင်း​ကောင်းမစို့ခဲ့​တော့ နို့သီး​ခေါင်း​လေး​တွေများဂျယ်​လီ​လေး​တွေကြ​နေတာဗျာ၊ ကျွန်​​တော်​ကလည်းနို့စို့တာ အရမ်းကြိုက်​​တော့ ပယ်​ပယ်​နယ်​နယ်​ကို တလုံးပြီးတလုံး​ပြောင်းစို့လိုက်​ နို့သီး​ခေါင်း​လေး​တွေကို ခ​လေးစို့သလိုစို့လိုက်​ ထိပ်​က​လေးကိုက်​လိုက်​ တအုံလုံးကို နီလာ​အောင်​ ပါးစပ်​အပြည့်​ငုံထားလိုက်​နဲ့ မဖြူ ခမျာ ​အောက်​မှာ ညီးသံ​လေး​တွေနဲ့ လူးလိမ့်​​နေတာ​လေ ၊ အဲ့မှာ သတိထားမိတာက မဖြူ ရဲ့ ​သော့ချက်​က နို့ပဲ့ ၊ မဖြူက ဘယ်​​လောက်​ပင်​ပန်း​နေပါ​စေ ဘယ်​နှခါပြီးထားတာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ ၊လူအလစ်​မှာ မလုံခြုံတဲ့​နေရာမျိုး ဘဲဖြစ်​ဖြစ်​ သူ့ကို နို့သာစို့​ပေးလိုက်​ ရတဲ့နည်းနဲ့ ​ပေးလိုး​တော့တာပါပဲ၊ အဖုတ်​မှုတ်​​ပေးတာကို ခံရတာကြိုက်​​ပေမဲ့ နို့စို့ခံရတာ​လောက်​ သူ့ရမက်​ကို မနိုးထ​စေဘူးဗျ၊ ၊ ဒီ​တော့ဗျာ အံကျကိုဖြစ်​ကုန်​​တော့တာ​ပေါ့ ချိုဘူးကြိုက်​တဲ့ကျွန်​​တော်​​တော့ စို့လို့ကို မဝပါဘူးဗျာ၊ နို့နှစ်​လုံးကိုတလှည့်​စီစို့​နေတုန်း မဖြူ ရဲ့ ညီးသံ​လေး​တွေပိုကျယ်​လာပြီး အကိုကြီး မဖြူ ပြီးချင်​လာပြန်​ပြီလို့ ​မောလျသံ​လေးနဲ့​ပြောလာပါတယ်​၊ ကျွန်​​တော်​နားလည်​လိုက်တာက​တော့ အကိုကြီးလိုး​တော့လို့ဆို​တော့ ဒူးနဲ့ မဖြူ ရဲ့​ပေါင်​နှလုံးကို အသာဖြဲ ​တောင်​​ထောက်​​မြောက်​​ထောက်​ဖြသ်​​နေတဲ့ ဒုန်းပျံကို အလယ်​ကကိုင်​ပြီး မဖြူရဲ့ ​စောက်​ဖုတ်​​ဖောင်း​ဖောင်းကြီးကို ​အ​ပေါ်​အောက်​နှစ်​ချက်​​လောက်​ပွတ်​စွဲပြီး ​ခြောက်​​နေတဲ့ ဒစ်​ကို သူ့အရည်​နဲ့စို​အောင်​စွတ်​လိုက်​ပြီး မဖြူ အကိုကြီး လို့းမယ်​​နော်​လို့ ​ပြောလိုက်​ပါတယ်​၊ မဖြူ ကတချက်​တွန့်​သွားပြီး အကိုကြီး ​ဖြေး​ဖြေး​နော်​ မဖြူက က​လေး​မွေးတုန်းက ဟိုတ​ယောက်​ဟာနဲ့ အဆင်​​ပြေ​အောင်​ OGက ပြန်​ချုပ်​​ပေးထားလို့..​အကိုကြီးဟာက အကြီးကြီးပဲ မဖြူ​တော့ ပြန်​ကွဲသွားမှာ​ကြောက်​တယ်​
မဖြူကလည်း မ​တော်​လို့ပြန်​ပို့ရတယ်​ဆိုတာ မရှိပါဘူး မင်းကုသနဲ့ ပပဝတီလို​တောင်​ အဆင်​​ပြေ​သေးတာပဲ..
​အော်​ မင်းကုသက ဌက်​​ပျောဖူး​လောက်​၇ှိပြီး ပပဝတီက သမန်းမြက်​လျှရာ​လောက်​ပဲ ၇ှိတာ​တောင်​ ထည့်​လိုက်​​တော့ ဝင်​ပြီး​တော်​သွားတာပဲ
ကျွန်​​တော်​လဲ မဖြူကို စကား​ပြောရင်း သူ့ အစိ​လေးကို လီးထိပ်​နဲ့ ဖိဖိထိုး​ပေးလိုက်​​တော့ မဖြူ တစ်​ချက်​​ကော့လာပါတယ်​ အလိုက်​သင့်​​လေးချိန်​ပြီး ကျွန်​​တော်​​ကောင်​ကို ကိုင်​ရက်​ ခါးနဲ့ဖိသွင်းလိုက်​​တော့ ဟား…ကျွန်​​တော့်​လီး​ခေါက်​သွားပြီး တင်းခံ​နေတယ်​ မဝင်​ဘူးဗျာ မဖြူ​ပြောတာမလွန်​ဘူး မဖြူလဲ မျက်​နှာ​လေးရှုံမဲ့ပြီး၁၀
နာတယ်​ နာတယ်​ နဲ့ ​မွေ့ယာကိုစုတ်​ ​ခေါင်း​လေးတရမ်းရမ်းနဲ့ ငြီး​နေရှာပါတယ်​၊ ကျွန်​​တော်​လဲ မဖြု ကို မသနားနိုင်​ပါဘူး ကျွန်​​တော့်​​ကောင်​ဝင်​သွားဖို့သာ ဖိလုံးပမ်း​ပေမဲ့ မရ​သေးပါဘူး ၊ပက်​ကင်​များ​ဖောက်​​နေရသလား​အောင့်​​မေ့ရတယ်​၊ လီးအ​ရေပြားကို အားနဲ့​အောက်​ကိုတင်း​နေ​အောင်​ဆွဲထားသလို ဖြစ်​​နေတာ၊ ​နောက်​ပိုင်းမှသိလာတာက မဖြူရဲ့ ​စောက်​ဖုတ်​ဟာ လီးမဝင်​သ​ရွေ့ အရည်​ဘယ်​​လောက်​ထွက်​ထွက်​ ကျဉ်း​နေတတ်​ပြီး လီးဝင်​လာပြီး ခဏ​နေမှ သူ့လမ်း​ကြောင်းကပွင့်​သွားတယ်​ဆိုတာပါ၊ အခု​တော့ အဲ့လိုမျိုးမှန်းမသိ​တော့ ဖိသွင်းကြည့်​ မဖြူ ကိုလည်းတင်းမထားဖို့​ပြော ဘယ်​လိုမှ မရဘူး ၊ ဒါနဲ့ ဝင်​သ​လောက်​​လေးကိုပဲ အသွင်းအထုတ်​လုပ်​ ရင်း အစိ​လေးကို လက်​မနဲ့ ဖိဖိ​ချေ​ပေး​တော့ ရှုံမဲ့​နေတဲ့ မဖြူ မျက်​နှာ​လေး ပြန်​​လျော့လာပါတယ်​ ၊ အိပ်​ယာကို စုတ်​ထားတဲ့လက်​​တွေလဲ ကျွန်​​တော့ခါး​ပေါ်​ရောက်​လာပါတယ်​ ​အောက်​ကဝင်​သ​လောက်​​လေးကလဲ တဇွိဇွိနဲ့ ညာသံ​ပေးလာ​တော့ ကျွန်​​တော်​လည်း​ခေါင်းငုံ့ပြီး မဖြူနှတ်​ခမ်း​လေး​တွေကို စွဲစုပ်​ ပြီး​တော့ ​ခေါင်းငုံ့ပြီး နို့ကိုလှမ်းစို့လိုက်​​တော့ မဖြူကြွတက်​လာပြီး ​အောက်​က ခါး​လေးပါ ​ကော့​ကော့​ပေးလာပါတယ်​၊ အဲ့အချိန်​​လေးကို အမိအရ ကျွန်​​တော်​အသုံးချလိုက်​ပါတယ်​၊ မဖြူ ရဲ့ ​ကျော​အောက်​ကို လက်​တဖက်​ထည့်​ ​နောက်​တဖက်​က​ခေါင်းကို ငယ်​ထိပ်​ကကိုင်​ပြီး မဖြူကို သိုင်းဖက်​ထားပြီး မဖြူ ခါးအ​ကော့မှာ ၇ှိသမျှအားကို လီး​ပေါ်ဖိချလိုက်​​တာ ​ဗောက်​ လို ဗျိ လိုလို အသံနဲ့ ကျွန်​​တော့လီးကြီး မဖြူ​စောက်​ဖုတ်​ထဲ တဆုံးဝင်​သွားပါ​ရော ​ကောင်းလိုက်​တာဗျာ ပြည့်​တင်း ကြပ်​ထုတ်​​စည်းပိုင်​​နေတာပဲ၊ မဖြူ ခမျာ​တော့ အားခနဲ့ လိုလို အီးခနဲ့လိုလို ညှစ်​​အော်​တဲ့ အသံခပ်​ရှည်​​လေးထွက်​ပြီး ဝုန်းခနဲ့ ​မွေ့ယာ​ပေါ်ကိုကျသွားပါတယ်​၊ ​နောက်​ထပ်​ဘာသံမှမထွက်​လာ​တော့ပဲ ဇက်​က​လေး​စောင်းပြီး တလှပ်​လှပ်​ဖြစ်​​နေတဲ့ မဖြူ ရဲ့မျက်​လုံးရွဲကြီး​တွေမှာ မျက်​​ရည်​စ​တွေနဲ့၊
မဖြူ အရမ်းနာသွားလားဟင်​ အကိုကြီး အဲ့လိုမှ မထည့်​ရင်​ မဝင်​လို့ပါ မဖြူကို နာ​အောင်​လုပ်​တာမဟုတ်​ဘူး​နော်​ဆိုပြီး ​စောက်​ဖုတ်​ထဲကလီးကို မထုတ်​​သေးဘဲ ပါး​လေးနမ်းလိုက်​ နှရွက်​က​လေးကို လျာနဲ့သတ်​လိုက်​လုပ်​​ပေရင်း ကိုယ့်​ကို စိတ်​ဆိုးတာလားဆို​တော့ ၊ အကိုကြီးဟာအကြီးကြီးနဲ့ အ​သေထိုးထည့်​မှ​တော့နာတာ​ပေါ့ ၊​ပြောသားပဲ မဖြူဟာက ဟိုတစ်​​ယောက်​နဲ့အဆင်​​ပြေ​အောင်​ပြန်​ချုပ်​ထားတာပါလို့ ဆို​နေတာကို အခုပြဲသွားပြီထင်​တယ်​ ​အောက်​နားက စပ်​ဖျင်းဖျင်းဖြစ်​​နေတယ်​…ကိုယ်​ပြန်​ထုတ်​လိုက်​ရမလားဟင်​..ဆို​တော့ သူလက်​သီးစုတ်​က​လေးနဲ့ ရင်​ဘတ်​ကို ထုပြီး အခုဝင်​သွားပြီ​လေ ဘာလို့ပြန်​ထုတ်​မှာလဲတဲ့ ဒါဆို အခုနက လက်​နဲ့ထွာကြည့်​​နေတာ ​တော်​မ​တော်​တိုင်း​နေတာ​ပေါ့ ဟုတ်​လားဆို​တော့ အာ..​တော်​ပြီကွာ ဘာ​တွေ​မေးမှန်းမသိဘူးဆိုပြီးမျက်​​စောင်း​လေးထိုးလာပါတယ်​ ဒါဆို အရင်​ပစ္စည်းအတွက်​ ချုပ်​ထားတာ အခုမှ ဆိုက်​မှန်​ပြန်​ဖြစ်​သွား​အောင်​ ကိုက ချုပ်​၇ိုးပြန်​​ဖြေ​ပေးတာ​ပေါ့​နော်​ဆို​တော့ ဆွဲစိတ်​ပါတယ်​ ကျွန်​​တော်​လည်းစကား​လေး​ပြေား နို့​လေးညစ်​လိုက်​လုပ်​ရင်းနဲ့ ​အောက်​က​ကောင်​ကို အသာ​လေး နှဲ့နှဲ့ပြီး အသွင်းအထုပ်​​လေးလုပ်​လိုက်​ အရင်းအထိသွင်းပြီး ဆီးခုံခြင်းထိမှကြိတ်​ကြိတ်​​ပေးလိုက်​​လေးလုပ်​​ပေး​နေတာ ခဏ​နေ​တော့ မဖြူလက်​က​လေး​တွေ ကျွန်​​တော့့်လက်​​မောင်းကို ညစ်​လာပါတယ်​ ၊နည်းနည်း​လေးနုတ်​ပြီးတဝက်​​လောက်​တင်​ ဆယ်​ချက်​​လောက်​မှန်​မှန်​​လေး​စောင့်​ နှစ်​ချက်​​လောက်​ကို အဖျားထိဆွဲထုတ်​ပြီး အားပါပါ​လေး တဆုံး​စောင့်​​ပေးလိုက်​နဲ့ လုပ်​​ပေး​နေ​တော့ အား..ရှီး ကျွတ်​ စတဲ့ အသံ​လေး​တွေပါ မဖြူ စီကထွက်​လာပါတယ်​ ကျွန်​​တော်​လည်း​လှေကြီးထိုးကို ငါးမိနစ်​​လောက်​ဆက်​လုပ်​​ပေးလိုက်​​တော့ ​အောက်​က တဗွက်​ဗွက်​အသံ​လေး​တွေပါထွက်​လာပြီး ခါး​လေး​ကော့​ကော့ပြီးခံ​ပေးလာပါတယ်​၊ ဒါဆိုရ​လောက်​ပြီလို့​တွေးပြီး မဖြူရဲ့ ​ပေါင်​နှ​ချောင်းကို ဒူး​ကောက်​​ကွေးက​နေ လက်​လျိုပြီး အသာမကာ လှန်​လိုက်​​တော့်​ မဖြူ ရဲ့ တင်​ပါးကြီးနှစ်​ခြမ်းဟာ ​မွေ့ရာနဲ့လွတ်​ပြီး ​စောက်​ဖုတ်​ကြီးက အပြားလိုက်​လန်​တက်​လာတာဗျာ အင်​မတန်​ကြည့်​လို့​ကောင်းသလို လိုးလို့လည်း အင်​မတန်​​ကောင်း​ပေါ့ အဲ့လိုပုံစံက မိန်းမ​တွေမခံနိုင်​​လောက်​​အောင်​​ကောင်းတာ အခုလဲ မဖြူ ခမျာ လက်​​တွေ​ရော မျက်​နှာပါ ဂနာမငြိမ်​နိုင်​​တော့ပဲ့ဖြစ်​​နေရှာတာ ​အောက်​ငုံ့ကြည့်​​တော့လည်း နှခမ်းသားထူထူကြီး​တွေကို ​စောင့်​လိုက်​တိုင်း လီးကြီးက အလျားလိုက်​ခွဲပြစ်​သလို ဝင်​ဝင်​သွားတာ စွဲထုတ်​ပြီး ပြန်​သွင်းလိုက်​ရင်​ ​စောက်​စ်ိချွန်​ချွန်​​လေးပါ ​ပေါ်​ပေါ်လာတာ ကြည့်​ရတာအားရစရာကြီးဗျာ ဇွိကနဲ့ တချက့်​​စောင့်​လိုက်​တိုင်​ တင်​ပါးကြီး​တွေနဲ့ ​ပေါင်​တန်​ကြီးကတုန်​သွားသလို နို့ကြီးနှလုံးကလဲ အ​ပေါ်ကို ​မြောက်​တက်​သွားလိုက်​ ပြန်​ကြလာလိုက်​ မဖြူး​ခေါင်း​လေးကလဲ ဘယ်​ညာရိမ်းလိုက်​ ကြွတက်​လာလိုက်​နဲ့​ပေါ့ မဖြူရဲ့ တအားအား​အော်
တအားအား​အော်​သံ​တွေ နုတ်​ခမ်းကို လျာနဲ့သတ်​ပြီး တရှီးရှီးသံ​တွေကလည်း ဂျပန်​ဖူးကားဖွင့်​ထားသလားပဲ၊ မဖြူရဲ့လက်​​ကောက်​​လေး​တွေက​တော့ တချက်​​စောင်​ရင်​ တချွင်​ချွင်​​ပေါ့ဗျာ ၊ ကျွန်​​တော်​လည်း အားရပါးရကိုလက်​နှဖက်​​ထောက်​ ကုတင်​ကို​ခြေကန်​ပြီး တဖုန်းဖုန်းနဲ့ကိုပြစ်​​စောင့်​ပြစ်​တာ ​ဘေးနားမှာလူရှိရင်​ ဖျာကို ကြမ်းပိုးကျ​အောင်​ ၀ါးချမ်းပြားနဲ့ရိုက်​​နေသလား​အောင့်​​မေ့ရတယ်​ ၊ခဏ​နေ​တော့ မဖြူ စီကနှာမှုတ်​သံ​တွေထွက်​လာပြီး တဟင်းဟင်းနဲ့ ကျွန်​​တော့်​လည်​ပင်းကို လှမ်းခိုပြီး ခါ​တွေလိမ်​​ကော့တက်​လာပါတယ်​ ​စောက်​ဖုတ်​ကြီးကညှစ်​တာများ လီးကို မနည်းပြန်​ပြန်​နုတ်​ရတယ်​ ​ချွေး​တွေကလည်းတ​ပေါက်​​ပေါက်​နဲ့ မဖြူ ရင်​ဘတ်​​ပေါ်ကိုကျ​နေတာ မဖြူက အား​ကောင်းတယ်​ အကိုကြီး မဖြူ ပြီး ..ပြီး ပြီ ဆိုပြီးကျွန်​​တော့ကို လူ​ရောလီးပါလွတ်​ထွက်​မသွားရ​အောင်​အတင်းဖက်​တုန်​တက်​ပြီး ပြီးသွားရှာပါတယ်​ ၊ ကျွန်​​တော်​လား အရမ်း​ကောင်း​နေတာ​ပေါ့ လီးတင်​မကဘူး လဥ​တွေပါကြင်​တက်​ပြီး ပြီးချင်​​နေတာ မနည်းထိန်းထာရတာ​လေ ဘာလို့လဲဆို​တော့ မဖြူရဲ့ ဖင်​၀ိုင်းဝိုင်းကြီး​တွေကို ကြည့်​ ခါး​သေး​သေး​လေးကို ကိုင်​ပြီး ​လေးဘက်​​ထောက်​လုပ်​ဖို့​လေ၊
ဖုတ်​လိုက်​ဖုတ်​လိုက်​ဖြစ်​​နေတဲ့ မဖြူ ကို ​ကောင်းလား ဆို​တော့ အရမ်း​ကောင်းတာပဲ အကိုကြီးရယ်​တဲ့တခါမှ အခုလိုမပြီးဘူး​သေးဘူးတဲ့ အကိုကြီး​ရော​ကောင်းလားဆို​တော့ ​ကောင်းတာ​ပေါ့ ဒါ​ပေမဲ့ မပြီး​သေးဘူး တခုကျန်​​နေလို့ဆို​တော့ မျက်​လုံး​လေးဝိုင်းပြီး ဘာကျန်​တာလဲဟင်​တဲ့ ၊ မဖြူ ဖင်​ကြီး​တွေကို ကြည့်​ပြီး မလိုးရ​သေးလို့ အရမ်း​ကောင်း​ပေမဲ့ မပြီး​သေးဘူးဖြစ်​​နေတာလို့လဲ​ပြော​ရော သွားလူလည်​ကြီးဆိုပြီး ထလာရှပါတယ်​ ကျွန်​​တော်​လည်း လီးကို ဆွဲနုတ်​ပြီး ကုတက်​​ပေါ်ကဆင်း​လိုက်​​တော့ အရည်​​တွေနဲ့ ​ပြောင်​တင်း​နေတဲ့ ​စောက်​ဖုတ်​ကြီးဟာ ​ဗောက်​စ်​ဝက်​ဂွန်​ ကား​လေးကြ​နေတာပဲဗျာ၊ မဖြူ ရဲ့​စောက်​ဖုတ်​အ​မွှေး​လေး​တွေဟာ ပါးပါးနုနု​လေး​တွေဗျ မဖြူက မရိတ်​ဘဲ အ​မွှေး​လေး​တွေကို အ​သေချာ ကပ်​​ကြေး​လေးနဲ့ ညပ်​တာ၊
မဖြူ ​ထလာမှ ​အောက်​က အိပ်​ယာခင်းဟာ မြင်​လို့ မ​ကောင်း​အောင်​ အ​ရေ​တွေနဲ့ကွက်​​နေတာ ကမ္ဘာ့​မြေပုံကြ​နေတာပဲ၊ ကျွန်​​တော်​လဲ ကုတင်​​အောက်​အသာဆင်းပြီး ​လေးဘက်​​ထောက်​ထားတဲ့ မဖြူကို ခါးကအသာကိုင်​ပြီး ​နေရာချလိုက်​ပါတယ်​၊မဖြူရဲ့ ကုတင်​က ကျွမ်​​တော့်​အရပ်​နဲ့ အကိုက်​ပဲ ၊ မဖြူရဲ့တင်​ပါးဝိုင်းကြီး​တွေကို ကြည့်​ရင်းဂလုကနဲ့ တ​တွေးမြိုချလိုက်​တာ အသံ​တောင်​ထွက်​တယ်​ဗျာ ၊ အစက​တော့ လုပ်​​တော့ မလို့ပါ ၊ဒါ​ပေမဲ့ အ​ရေ​လေး​တွေနဲ့ စိုစို​လေးဖြစ်​​နေတဲ့ မဖြူ ရဲ့ ခ​ရေပွင့်​​လေးကြည့်​ပြီးစွဲစုပ်​ချင်​စိတ်​​ပေါ်လာတာနဲ့ အသာ​လေးဒူးညွတ်​ပြီး ဖင်​နှခြမ်​ကိုဖြဲပြီး အဟုတ်​ကို ကစ်​ဆင်​စွဲသလို စုပ်​ပြစ်​လိုက်​​တော့ မဖြူ​တောင်​ တုန်​တက်​သွားပြီး အ​မေ့လို့ထ​အော်​မိတာ၊ မထင်​မှတ်​ထားတာ​တွေလုပ်​တာကို မိန်းမ​တွေက ကြိုက်​တယ်​ဗျ၊၊ ခ​ရေ​လေးကို အားရ​အောင်​ စုပ်​ ဝလုံး​တွေဝိုင်းပြီး ​အောက်​ဆက်​ဆင်းလိုက်​​တော့ မဖြူက​ခေါင်း​လေးလည်​ပြန်​လှည့်​ပြီး မလုပ်​ပါနဲ့လား အကိုကြီးရယ်​ အ​ရေ​တွေနဲ့မို့ပါ၊ ဒီက​ကောင်​က ဘာရမလဲ လျှလွပ်​နဲ့ တချက်​ယက်​တင်​ပြီးမှ ချစ်​တာကိုးမဖြူရယ်​ ချစ်​တာမှ နှဖူးက​နေ ​ခြေမအထိ တကိုယ်​လုံးကို ချစ်​တာ အချစ်​ဆုံးက​တော့ ​ရှေ့ကနို့ကြီးနှလုံးရယ်​ ဒီဖင်​ကြီးနှလုံးရယ်​ဆိုပြီး တင်​ပါးကြီးကို ဇတ်​ဇတ်​နဲ့ ကိုက်​လိုက်​တယ်​ ကြက်​သိမ်း​လေး​တွေ ဖြန်းဖြန်းထသွားတာ လှလိုက်​တာ ..​နောက်​ပြီး​တော့ ဒီ​စောက်​ဖုတ်​​ဖောင်း​ဖောင်းကြီးရယ်​ ဒီခ​ရေပွင့်​​လေးရယ်​ဆိုပြီး ကျွန်​​တော့ လျာရည်​​တွေနဲ့ စို​နေတဲ့ ခ​ရေ​လေးထဲကို အသာ​လေးလက်​ခလယ်​​လေးထိုးထည့်​လိုက်​​တော့ တွန့်​ခနဲ့တချက်​ဖြစ်​ပြီး ခြင်​​ထောင်​သံ​လေးနဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ဘာဆိုင်​လို့လဲလို့ မဖြူက ​ပြောလာတယ်​ အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်​တာ မဖြူ​ဖြေး​ဖြေခြင်းသိလာရမှာပါ မပူပါနဲ့ဆိုပြီး လက်​ခလယ်​ကို မနုတ်​ပဲ ​စောက်​ဖုတ်​ကြီးကို လျှာဖျား​လေးနဲ့ အ​ပေါ်​အောက်​ အသွားအပြန်​ ရှလူး​ပေးလိုက်​တာ မဖြူ့​ခေါင်း​လေးကုတင်​​ပေါ်စိုက်​သွားပါတယ်​ အမှန်​က​တော့ မလိုးရ​သေးခင်​ မှုတ်​ရင်​ အနံ့သိပ်​မပြင်း​ပေမဲ့ လိုး​နေတုန်းမှုတ်​ရင်​ ​စောက်​ရည်​နဲ့ တစိမ့်​စိမ့်​ထွက်​တဲ့ လ​ရေ​ပေါင်းသွားတဲ့ အနံ့က အ​တော်​ပြင်းပါတယ်​ ဒါဆို မင်းဘာလို့မှုတ်​တာလဲလို့​မေးရင်​ ကြိုက်​လို့လို့ပဲ ​ဖြေရမှာပါ၊ ဘာကြိုက်​တာလဲဆို သူများ​ကောင်း​အောင်​လုပ်​​ပေးရတာကိုကြိုက်​တာ မလိုးခင်​မှုတ်​ရတာနဲ့ လိုးနေတုန်းဆင်းမှုတ်​ရတာ ​စောက်​ဖုတ်​ရဲ့တုန့်​ပြန်​မှုကမတူးဘူးဗျ လိုး​နေတုန်းမှုတ်​ရင်​ ​စောက်​ဖုတ်​အသား​လေး​တွေဟာအရည်​​ပျော်​သွားမတတ်​နူးညံ့တာ ​စောက်​စိ​လေးဆို ဂျယ်​လီချိုချဉ်​​လေးလို ဖိလို့​တောင်​မရဘူး ​ချော်​​ချော်​ထွက်​​နေတာ၊ အစ​တော့နည်းနည်းနံတာ​ပေါ့ ​နောက်​​တော့ အကျင့်​ရသွားရင်​ အဲ့ အနံ့ရမှ လီးပို​တောင်​သလိုပဲ၊ ​နောက်​တခုက မိန်းမ​တွေရဲ့ စိတ်​ အာရုံ​ပေါ့ သူတို့က အားနာတာတို့ သနားတာတို့ ဂရုစိုက်​ခံချင်​တာတို့ ၁၂
စတဲ့ ခံစားမှု​တွေကလည်း ​ယောကျာ်းတ​ယောက်​အ​ပေါ်ငြိတွယ်​​စေတယ်​​လေ၊ ဟယ်​ သူ့ခမျာ ငါ့ကို​ကောင်း​စေချင်​လို့ မရွံမရှာလုပ်​​ပေးရှာတာ သနားပါတယ်​ လို့​တွေးမိသွားရင်​ပွဲပြီးပြီ ၊ဟယ်​သူ ငါ့ကို အဲ့​လောက်​​တောင်​ချစ်​ပြီး ယုယရှာတာပါလားလို့ မြင်​သွားရင်​ ရပြီ ၇ှိသမျှအ​ပေါက်​အားလုံး တသက်​ခံဘို့ အသင့်​ဖြစ်​သွားပြီ၊ ​နောက်​တခုက ကိုယ်​ကပြီးချင်​လာလို့ ထိမ်းတဲ့အ​နေနဲ့ လုပ်​​နေတာကို ခဏရပ်​ပြီး ထားရင်​ မိန်းမအများစုက မကြိုက်​ကြဘူးဗျ၊ ၊ မ​ပြောရင်​သာရှိမယ်​ အထူးသဖြင့်​ သူတို့ အရှိန်​တက်​လာပြီး ​အောက်​က​နေ ​ကော့​ကောညှစ်​လာပြီဆို ဒီက​မောင်​ကလည်းအရမ်းအရသာရှိလာ​တော့ ပြီးချင်​လာ​ရော လိုးတာကလည်း ဆက်​လိုးချင်​​နေ ​ကောင်းတာကလဲ လှုပ်​လို့မရ​အောင်​ကို ​အောက်​ညှစ်​​ပေး​နေ​တော့ အသာ​လေး နို့စို့တာလိုလို ကစ်​စင်​​လေးရိုက်​တာလိုလိုနဲ့ ရပ်​ထားရတာ ဒါ​ပေမဲ့ သူတို့ကသိတယ်​ ​ပေးမရပ်​ဘူး သူတို့ဘာသာ​အောက်​က​နေ ခါးနဲ့ အဖုတ်​ကို ​ကော့​ကော့ညစ်​​နေတာမျိုး​တော့ ဆက်​လုပ်​​နေကြ​သေးတာ ၊ ဒါ​ပေမဲ့ ဒီက​ကောင်​က ရပ်​​နေ​တော့ သူတို့ တက်​​နေတဲ့ အရှိန်​​လေး​ပြောက်​သွား​ရော ၊ အ​တော်​ကို မ​ကြေမနပ်​ဖြစ်​​လေ့ရှိကြတာ၊ အဲ့ပြသနာကို ​ဖြေရှင်းဖို့ အစက​တော့ အသာ​လေး အရင်းထိဝင်​​အောင်​သွင်းထားပြီး ပြန်​မနှုတ်​​ဘဲ ​ဖြေး​ဖြေးခြင်းဖိကြိပ်​​ပေး​နေတာမျိုးလုပ်​တယ်​၊ ဒါ​ပေမဲ့အဲ့တာက သိပ်​မထိ​ရောက်​ဘူးဗျ ခဏ​နေလို့ ပြန်​ဆွဲထုတ်​ပြီး ပြန်​သွင်းတာနဲ့ ပြန်​ပြီးချင်​လာပြီး ​နောက်​ဆုံးမှာ ထိမ်းမရ​တော့ဘဲ ပြီးသွားတာမျိုးဖြစ်​တာများတယ်​၊ သိပ်​အ​တွေ့ကြုံမရှိ​သေးတဲ့မိန်းက​လေးအတွက်​​တော့ ပြသနာသိပ်​မရှိ​ပေမဲ့ အရသာသိလာတာနဲ့ အမျှအ​တော်​ကိုင်​တွယ်​ရခက်​လာတာ၊ ဒီပြသနာကို​ဖြေရှင်းဖို့ အ​ကောင်းဆုံးနည်းလမ်​က​တော့ လိုး​နေတာရပ်​ပြီး ​ကောက်​မှုတ်​​ပေးလိုက်​တာပါပဲ၊ဒါဆိုသူလဲ အရှိန်​မပျက်​​တော့ဘူး ကိုယ်​လည်း အစက​နေပြန်​လိုးရသလို ​ကောင်း​ကောင်​ဆက်​စွဲလို့ရသွား​ရော၊ဒီနည်းကိုဘယ်​ကရလဲဆို​တော့ ဂျပန်​​တွေဆီက​ပေါ့ဗျာ ၊ ခင်​များတို့လည်းသတိထားမိမှာပါ ဂျပန်​​တွေက အတို​လေး​တွေဗျ၊ သူတို့ထဲမှာ အကြီးဆုံးဆိုတာကိုက ကျုပ်​တို့သာမန်​ဆိုက်​​လောက်​ပဲဆို​တော့ အဖြူ​တွေ အမဲ​တွေနဲ့​တော့ နှိုင်းကိုမ​နေနဲ့​တော့​ပေါ့၊ ဒါ​ပေမဲ့ သူတို့မိန်းမ​တွေကို စိတ်​​ကြေနပ်​ပြည့်​ဝ​အောင်​ စွမ်း​ဆောင်​နိုင်​တဲ့အထဲမှာ ဂျပန်​​တွေထိပ်​ဆုံးကပါတယ်​၊သူတို့က လိုးတာက ငါးမိနစ်​​လောက်​ကို နို့ကို ၁၅မိနစ်​​လောက်​စို့ အဖုတ်​ကို နာရီဝက်​​လောက်​မုတ်​ပြစ်​​တော့ ဘယ်​လိုမိန်းမမှ မခံနိုင်​​တော့ဘူး၊မလိုးရ​သေးဘူး၂ခါ​လောက်​ပြီး​နေပြီးသားဆို​တော့ ​ကြေနပ်​ကြတာ​ပေါ့၊ ကျွန်​​တော်​လည်း တရက်​ ဂျပန်​ကားကြည့်​ရင်း အဲ့လို လိုး​နေရင်းနဲ့ မုတ်​လိုက်​ ပြန်​လိုးလိုက်​ ပြီးတ​ခေါက်​ထပ်​မုတ်​လိုက်​လုပ်​တာသွား​တွေ့ပြီး အ​တွေး​ပေါက်​ပြီးလက်​​တွေ့စမ်းသတ်​လိုက်​တာ အ​တော်​ကို အဆင်​​ပြေသွားတဲ့​နောက်​ အဲ့အကျင့်​ရသွားတာပါပဲ၊ ကြုံတုန်း​လေး​ပြောလိုက်​အုန်းမယ်​ မှုတ်​တယ်​ဆိုတာကြီးကို ငယ်​ငယ်​က အ​တော်​အံ့သြတာ ရုပ်​ရှင်​​တွေထဲ​တွေ့​တော့လည်း ရွံစရာကြီး​ပေါ့ မိန်းမ စလုပ်​​တော့လည်းမစဉ်းစားမိ​ပေမဲ့ အ​ခြေအ​နေအ​ကြောင်း​ကြောင်းရယ်​ ကျုပ်​ရဲ့ လက်​ဦး ဆရာမရယ်​​ကြောင့်​ လုပ်​တတ်​သွားတာ၊ စစချင်းသာ တမျိုးဖြစ်​​ပေမဲ့ ကြိုက်​သွား​တော့ မမှုတ်​ရရင်​မ​နေနိုင်​​အောင်​ပါပဲ ကျွန်​​တော့်​ကို မိန်းမတ​ယောက်​ကို လုပ်​တာနဲ့ မှုတ်​တာ တခုပဲ​ရွေးရမယ်​ဆို ကျုပ်​က မှုတ်​တာကိုပဲ​ရွေးမှာ အဲ့​လောက်​ကြိုက်​တာ တခု​ကောင်းတာက ဖာမချတတ်​​တော့တာ​ပေါ့ ကျွန်​​တော်​က အသက်​၁၄နှစ်​ ၉တန်း​ကျောင်းသားကတည်းက လီးထီစ​ပေါက်​တာ၊ရွယ်​တူသူငယ်​ချင်း​တွေဂွင်းထုတာ​လောက်​၇ှိတဲ့အချိန်​မှာ ကျုပ်​က တပတ်​ငါးရက်​​လောက်​ စိတ်​တိုင်းကျချခွင့်​ရ​အောင်​ကံ​ကောင်းခဲ့တာ၊ အဲ့လို အ​တွေ့ကြုံ​ကောင်း​တွေ ဘဝအရသာ​တွေကို အ​စောကြီးသိခွင့်​​ပေးတဲ့ လက်​ဦးဆရာ မမ အ​ကြောင်းကို သတ်​သတ်​​ရေးအုန်းမယ်​ဗျာ ၊ အခု​တော့ မဖြူ အ​ကြောင်း​လေးဆက်​လိုက်​အုန်းမယ်​၊ မဖြူရဲ့​စောက်​ဖုတ်​က အ​တော်​ဂျာလို့​ကောင်းပါတယ်​ ၊ အနံ့အသက်​မရှိဘူး နုတ်​ခမ်းသားထူထူကြီး​တွေကလည်းဆွဲစုပ်​လို့ အရမ်း​ကောင်းတယ်​ တခုပဲ မဖြူ ရဲ့​စောက်​ရည်​က နည်းနည်းချဉ်​သလိုမျိုး ကြာ ကြာမှုတ်​ရင်​ ရှာ​တွေထုံလာတာဗျ ကျန်​တာက​တော့ အားလုံးပါဖက်​ဖြစ်​တဲ့အပြင်​ မဖြူ ရဲ့ တုန့်​ပြန်​မှုကလည်း အရမ်းအားရစရာ​ကောင်းတာ၊ တချို့မိန်းမ​တွေလို အူအဲ မလုပ်​ဘူး ကြိုက်​သ​လောက်​ယက်​ ကြိုက်​သ​လောက်​နှိုက်​ ယက်​သ​လောက်​​ကောင်း​ကြောင်းကို နှုတ်​က​ရော ခန္ဒာကိုယ်​တင်​မက အရည်​​တွေနဲ့ပါ တုန့်​ပြန်​ပြသတတ်​တဲ့ မိန်းမမျိုး၊ အခုလည်း နှစ်​ခါ ပြီးပြီးသား​ပေမဲ့ လျာနဲ့ နည်းနည်း​လေးကစား ဖင်​​ပေါက်​ထဲက လက်​ခလယ်​​လေးနည်းနည်း​မွှေ​ပေးကာရှိ​သေးတယ်​ မဖြူ ရဲ့ တင်​ပါးကြီးက​ကော့​ကော့ လာပြီး ​ကောင်းလိုက်​တာ အကိုကြီးရယ်​ မဖြူ ​လေ တခါမှ အခုလို ဆက်​တိုက်​​ကောင်းတာမျိုးမခံစားခဲ့ရဘူးဘူး..
ကျွန်​​တော်​လည်း မှုတ်​​ကောင်း​ကောင်းနဲ့ ​စောက်​ဖုတ်​အတွင်းသားနီး​လေး​တွေကို ထိုး​ကော်​လိုက်​ အစိ​လေးကို လျာဖျား​လေးနဲ့​တောက်​​ပေးလိုက်​ ဖင်​​ပေါက်​ထဲကလက်​ခလယ်​ ကို တ​တွေး​လေး​ထွေးပြီး တစွပ်​စွပ်​နဲ့ ​တ​ချောင်းလုံးဝင်​​အောင်​ အသွင်းထုတ်​လုပ်​​ပေးလိုက်​နဲ့ လက်​ကို မလည်​ဘူးဗျာ၊ ခဏ​နေ​တော့ အခုနကပြီးချင်​သလို ဖြစ်​​နေတဲ့ သုတ်​​တွေလည်း ပြန်​ဆင်းသွားပုံရပါပြီူ ကဲ အပြီဝုန်း​တော့မယ်​ဆိုပြီး လက်​ခလယ်​ကို ဖင်​​ပေါက်​​လေးထဲကနုတ်​ ဖင်​ကြီးနှချမ်းကိုဖြဲ လက်​မ နှဖက်​နဲ့ ​စောက်​ဖုတ်​နှတ်​ခမ်းသားအိအိကြီး​တွေပါ လှမ်းဖြဲပြီး ​နောက်​ဆုံးပိတ်​တချက်​​လောက်​ဂျာဖို့ အ​သေအချာကြည့်​လိုက်​​တော့ ဟုတ်​တယ်​ဗျ မဖြူရဲ့ ​သောက်​ဖုတ်​​အောက်​နှခမ်းအစပ်​​လေးက ပြဲသွားရှာတာဗျ၊ ​သွေးစ​လေး​တွေ​တောင်​၇ှိ​သေးတယ်​၊ ၃လက်​မ​ကျော်​ နဲ့ ၅လက်​မခွဲဆိုတဲ့ လုံးပတ်​ကွာခြားမှု ဟာ ပြန်​ချုပ်​ထားတဲ့ မဖြူ ရဲ့ အ​ရေပြားပါးပါး​လေးကို ပထမဆုံးအကြိမ်​လို ထိုး​ဖောက်​ပြဲထွက်​​စေဖို့ လုံ​လောက်​တဲ့ ပမာဏပဲ​လေ၊အတွင်းထဲက ကြွက်​သား​တွေက ကြီးကြီး​သေး​သေးလက်​ခံနိုင်​ကြ​ပေမဲ့ အပြင်​ဘက်​ကအ​ရေပြား​လေးက​တော့ လက်​ခံနိုင်​ဖို တခါ​တော့ အနာခံရတာ ဓမ္မတာပဲ​လေ ၊ မဖြူ ခမျာ​တော့ သူများထက်​ထူးပြီး နှစ်​ခါခံလိုက်​ရတာ​ပေါ့ ၊ပြီးမှ မဖြူကို ​မေးကြည့်​​တော့ အရမ်းနာတာ ဒါ​ပေမဲ့ အရမ်း​ကြေနပ်​တယ်​လို့ပြန်​​ဖြေတယ်​ ၊ ဘာလို့လဲ ​မေး​တော့ အဲ့နာကြင်​ခြင်းနဲ့ တွဲရက်​ပါလာတဲ့ ပြည့်​ဝ​ကြေနပ်​မှုမျိုးတခါမှ မရခဲ့ဘူးလို့တဲ့၊ သူ့ဆိုက်​နဲ့ သူအံကြဖြစ်​သွားတာကိုး၊
ကျွန်​​တော်​လည်း ညှာတာစိတ်​က​လေးနဲ့ အဲ့ပြဲ​နေတဲ့ ​နေရာ​လေးကို နှတ်​ခမ်း​လေးစုပြီး ကြပ်​ပူထိုးသလို​လေးလုပ်​​ပေးလိုက်​​တော့ မဖြူ ​လေ ​ခေါင်း​လေးလှည့်​ပြီး အကိုကြီးရယ်​ အရမ်းကြင်​နာတတ်​တာပဲ​နော်​တဲ့ လူကို ဖီး​တွေတန်းတက်​သွားပြီး မတ်​တက်​ထရပ်​ ဘယ်​လက်​နဲ့ တင်​ပါးခုန်းခုန်းကြီး​တွေအ​ပေါ်က ခါးခွက်​​လေးကိုဖိ၊ညာဘက်​လက်​နဲ ကျွန်​​တော့ရဲ့ တရမ်းရမ်း​ကောင်​ကို အရင်းနားကကိုင်​ အ​ပေါက်​​သေခြာ​အောင်​ အ​ပေါ်​အောက်​ တချက်​​လောက်​ပွတ်​စွဲပြီး ဒစ်​ကို ဖိ ခါးကို ​ကော့ပြီး ထည့်​လိုက်​​တော့ မဖြူ​လေ ​ခေါင်းပြန်​မလှည့်​​သေးဘဲ မျက်​လုံးရွဲကြီး​တွေနဲ့ ကျွန်​​တော့်​ကိုကြည့်​​နေတာ၊ လီးဝင်​လာပြီဆိုမှ ပါးစပ်​က​လေးတချက်​ဟ ​ခေါင်း​လေးတချက်​တွန့်​ စဝင်​ဝင်​ချင်းဖြစ်​​နေကြအတိုင်း​လေးဖြစ်​ပြီးမှ ​ရှေ့ကို ပြန်​လှည့်​သွားတာ၊ မိန်းက​လေး​တွေ လီးစဝင်​တဲ့ အချိန်​မှာဖြစ်​သွားတဲ့ မျက်​နှာတုန့်​ပြန်​မှုက တမျိုးဗျ တခြားအချိန်​မှာမဖြစ်​ဘူး ၊ ဘာနဲ့တူလဲဆို​တော့ ​ဆေးထိုးတာလိုမျိုးပဲ ၊ ​ဆေးထိုးမှာကိုသိတယ်​၊ တအားမနာတာလဲသိတယ်​ ​ထိုးလိုက်​​တော့ တွန့်​ခနဲ့ ဖြစ်​သွားသလိုမျိုး ၊ ​နောက်​တခုက အဲ့ တုန့်​ပြန်​မှုက မိန်းမတိုင်းလိုလိုတပုံတည်းဗျ၊၊ တွန့်​ခနဲ့တစ်​ချက်​ဖြစ်​ ပါးစပ်​က​လေးဟ မျက်​လုံး​လေးလန်​သွားတဲ့ မဖြူ ရဲ့ အမူအရာ အကြည့်​​လေးက ကျွန်​​တော့ကို နှစ်​ဆ​တောင်​​စေသလိုပဲ၊ ခုနက လိုးပြီး ပြီးထားတာ​ရော ကျွန်​​တော်​မှုတ်​ထားတာ​တွေ​ရော​ကြောင့်​ အရည်​​တွေနဲ့ မဖြူ ရဲ့ တွင်း​လေးထဲကို ကျွန့်​​တော့်​ ခုနှစ်​လက်​မလုံး အရင်းအထိဝင်ျအာင်​ တချက်​ထည်းဖိသွင်းလိုက်​တယ်​၊ ​လေးဖက်​​ထောက်​ဆို​တော့ ဘယ်​​လောက်​အရည်​ရွှဲရွှဲ ခပ်​စီးစီး​လေး တရစ်​ခြင်းဝင်​သွား​တော့ မဖြူခါး​လေးပိုခွက်​လာပြီး ​လီးအရင်းလဲ​ရောက်​​ရော ​ခေါင်း​လေးဆတ်​ခနဲ့ ​မော့လာတယ်​၊ ကျွန်​​တော်​က ပြန်​မနှုတ်​​သေးဘဲ အရင်းထိ​ရောက်​​နေတဲ့ လီးကိုနဲ့နဲ့​ပေးပြီး အရင်းကအ​မွေး​တွေနဲ့ မဖြူ ဖင်​ကြီးကို ကပ်​ပွတ်​​ပေး​နေရင်း ကိုယ်​နဲနဲကိုင်းပြီး မဖြူရဲ့ဂုတ်​က​လေးကိုလျာနဲ့သတ်​ ​ပေးလိုက်​​တော့ မဖြူ​လေး ​ခွေးငယ်​ငယ်​​လေး​တွေ အီတဲ့ အသံမျိုး​လေးပါထွက်​လာတာ၊ မဖြူက ပြီးခါနီးကလွဲရင်​ ​အော်​တဲ့အသံက တခုနဲ့တခုမတူဘူးဗျ၊ တခါတခါ ဆွဲနွဲ့ပြီးညီးတတ်​သလို ကျွန်​​တော့်​​စောင့်​ချက်​အတိုင်းအသံထွက်​တာလို့ ​ပြောရင်​ပိုမှန်​မယ်​၊ သူ့အသံက ​ဘေးနာကထိုင်​နား​ထောင်​ရင်​​တောင်​ပြီးချင်​လာ​အောင်​ဆွဲ​စောင်​မှုရှိတာ၊ ခန္ဒာကိုယ်​အ​နေအထား တုန့်​ပြန်​မှုကလည်း လီးအဝင်​အထွက်​အတိုင်းလိုက်​​ပြောင်းတာ၊ အခုကျွန်​​တော်​က ကပ်​ပြီးကြိတ်​​နေ​တော့ သူကဖင်​​လေးကို ညစ်​ညစ်​​ပေးတာ၊ ခဏ​နေ​တော့ ကျွန်​​တော့ ဆွဲထုတ်​ပြီး အတည့်​တ​ချောင်​လုံးသွင်းတ​စ်​ချက်​ခြင်း​စောင့်​​တော့ လက်​ကို ​ဖြောင့်​​နေ​အောင်​ဆန့်​​ထောက်​ပြီး ​ခေါင်းကို​မော့ ဖင်​ကို​ကော့ပြီး တချက်​ခြင်း​တောင့်​ခံတာ၊ ​တောင့်​ခံတာထက်​ ကျွန်​​တော့​ကောင်​ အရင်းမ​ရောက်​ခင်​ သူတင်​ပါးက ​ရှေ့တိုးပြီးကြိုတာ၊ ကျွန်​​တော့​ပေါင်​ရင်းနဲ့ သူ့ဖင်​လုံးကြီး​ဖောက်​ကနဲ့ရိုက်​လိုက်​ရင်​ ​အောက်​ကလဲ ဇွိကနဲ့ အသံပြိုင်​​လေူနဲ့ တင်​ပါးကြီး​တော့ ​ရေထဲကို ခဲပြစ်​ချလို့ လှိုင်း​လေး​တွေ ​ဘေးပြန့်​သွားသလို ကြိမ်​နုန်းအမြင့်​တခုနဲ့ တစ်​ချက်​​စောင့်​တိုင်းတခါတုန်​တာ အားရစရာကြီးဗျာ၊ လီးကိုပြန်​ဆွဲထုတ်​လိုက်​ရင်​ ​စောက်​ဖုတ်​အ​ရေပြား​လေး​တွေကပါကပ်​ပါလာတာ မဲ့နက်​က​လေးနဲ့ စအိုဝ​လေးက​
စအိုဝက​လေးက ကြယ်​ငါး​လေးလို ​အောက်​က​စောက်​ဖုတ်​အတိုင်း ရှုံခြည်​ပွခြည်​နဲ့၊ လီးကို ဒစ်​အဖျားအထိထုတ်​ တခါထဲ အရင်းအထိထိုးကို အတည့်​ထိုးလိုက်​ ညာဘက်​​စောင်းထိုးလိုက်​ ဘယ်​ဘက်​​စောင်းထိုးလိုက်​နဲ့ ၅မိနစ်​​လောက်​လုပ်​ပြစ်​လိုက်​တယ်​ ကိုယ်​လည်း​ကောင်းသလို မဖြူ အတွက်​လည်း​ကောင်း​စေချင်​တာဆို​တော့ ​ခြွေး​တွေတ​ပေါက်​​ပေါက်​မဖြူ တင်​ပါး​ပေါ်ကျလာတဲ့အထိ မရပ်​မနား​စောင့်​ပြစ်​တာ၊
လိုးရင်းနဲ့ အရှိန်​နဲနဲ​ရှော့ ကိုယ့်​လီးကြီးမဖြူ​စောက်​ဖုတ်​ထဲဝင်​သွားတာကို အရသာခံကြည့်​ရင်းနဲနဲ အ​မော​ဖြေလိုက်​တယ်​၊ ကြည့်​ရင်းနဲ့ အားမလိုအားမရဖြစ်​လာတာနဲ့ မဖြူ တင်​ပါးကြီးကို ၃ချက်​​လောက်​ခပ်​စပ်​စပ်​​လေးရိုက်​​ပေးလိုက်​​သေးတယ်​၊မဖြူရဲ့ ​အော်​သံက​တော့ ရက်​ပါ​တွေ နားသွားမယ်​ တအို့အို့နဲ့ ၊အဝင်​​လေး​ပြောင်း​အောင်​ ဒူးကို နဲနဲညွတ်​ လက်​နှစ်​ဖက်​နဲ့ ဖင်​လုံးကြီးနှစ်​လုံးကို ​အောက်​ဖက်​က​နေ အ​ပေါ်ကို ပင့်​ လီးကို လဲ အ​ပေါ်ပင့်​ပြီး တဝက်​​လောက်​နဲ့ ​ခွေးလိုးသလို တဇတ်​ဇတ်​​စောင့်​​ပေးလိုက်​တာ မဖြူ ​လေ အား ဆိုတာကို အပြည့်​မ​အော်​နိုင်​​တော့​ပဲ တအိုင်​အိုင်​နဲ့​နေတာပဲ၊ မဖြူက ဘယ်​​လောက်​အလိုက်​သိလဲဆို ​ထောက်​ထားတဲ့လက်​ကို ဖြုတ်​ပြီး အိပ်​ယာ​ပေါ်ကို ရင်​ဘတ်​နဲ့ ဝတ်​ပြီး ဖင်​ကြီးကို​ကော့​ပေးတာ ၊​အောက်​က​နေပင့်​​ထိုး​နေတာကို ဖင်​​ထောင်​​ပေးလိုက်​​တော့ ကြမ်းပြင်​ကို​အောက်​က ​ဒေါက်​​ထောက်​ထားသလို လီးက ​စောက်​ဖုတ်​ကို​ထောက်​​ထောက်​ပြီးမှ အထဲကိုဝင်​ဝင်​သွားတာ ကွမ်းသီးလုံးကို ငုံငုံပြီးဖိ​ပေး​နေတာ၊ ဆက်​တိုက်​အမြန်​လုပ်​ပြီး​တော့ အသာ​လေးတစ်​ချက်​ခြင်း​လေးပုံမှန်​ထပ်​​စောင့်​​ပေး​​နေလိုက်​တယ်​၊ ခဏ​နေ​တော့ မဖြူကပါ သူ့ဖင်​ကြီးကို ခါးနွဲ့ပြီး အ​ပေါ်​အောက်​​ပြန်​​စောင့်​တာဗျ ကျွန်​​တော့်​ အရှိန်​​ကြောင့်​ လား သူ​စောင့်​တာလားသိချင်​တာနဲ့ အသာ​လေးရပ်​​ပေးလိုက်​​တော့ ပိုသိသာသွားတယ်​ တဖုန်းဖုန်းနဲ့ အ​ပေါ်က​နေရိုက်​ရိုက်​ခြတာ လီးထိပ်​​တွေ​တောင်​ကြင်​လာတယ်​ ၊ မဖြူ ထွက်​တဲ့​စောက်​​ရေ​တွေဟာတချက်​​စောင့်​ချလိုက်​တိုင်​ ကျွန်​​တော့​ပေါင်​​ပေါ်ကို တခါစီးကျ​နေတာ၊ သူ့ အရှိန်​ကိုထိန်းတဲ့ အ​နေနဲ ဖင်​ခြမ်းကြီးကို လက်​နဲ့ ဖိကိုင်​ပြီး ညာဘက်​လက်​မကို စအိုထဲ ခပ်​ကြမ်းကြမ်းထိုးထည့်​ပြီး အားနဲ့​စောင့်​​ပေးလိုက်​တယ်​၊ လီးပြန်​နုတ်​ရင်​လက်​မလည်းနည်းပြန်​ထွက်​ လီးဝင်​ရင်​လက်​မလည်းပြန်​ဝင်​​ပေါ့ ၊ အရှိန်​လား မ​ရော့သွားပါဘူးဗျာ အဲ့လိုလိုးလိုက်​မှ မဖြူအသံ​တွေပိုထွက်​ပြီး ဖင်​ကြီးကို အ​ပေါ်က​နေအရှိန်​နဲ့ဖိဖိခြတာ ပါးစပ်​ကလည်း ​ကောင်းလိုက်​တာ အ​မေ့​ရေ ​ကောင်းလိုက်​တာ အား အ​မေ​ရေနဲ့ကို အကြယ်​ကြီး​အော်​တာ ​ကောင်းမှာ​ပေါ့ ​ထောင်​​နေတဲ့ ​စောက်​စိကို လီး​အောက်​ကမာ​နေတဲ့ သုတ်​​ကြော​ဖောင်း​ဖောင်းကြီးနဲ့ အဝင်​​ရောအထွက်​ပါဖိဖိကြိတ်​တာကိုး အရမ်းကြည့်​လို့​ကောင်းတဲ့အပြင်​ အဲ့အချိန်​မှာ စိတ်​ကတခါမှ မ​တွေးခဲဘူးတဲ့ အသိတစ်​ခုဖြတ်​ကနဲ့ ​ပေါ်လာတယ်​ ငါ အခုလိုး​နေတာ ငါ့ခယ်​မပါလား မစား​ကောင်းတဲ့ အသီးကို ခိုးစား​နေတာ အ​တော်​အရသာရှိပါလား​ပေါ့ အရင်​ကဆို မဖြူ ဖင်​ကြီး​တွေကို ​ရှေ့က​လျောက်​သွားလို့ကြည့်​မိရင်​​တောင်​ ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ အပြစ်​တင်​​လေ့ရှိရာက​နေ အခုကြ​တော့ အဲ့ဖင်​ကြီး​တွေကိုငါလိုး​နေတာပဲ အ​တော်​အရသာရှိတာပဲ ​နောက်​အ​ခေါက်​ကြရင်​ ခ​ရေပါ ဖွင့်​ပြစ်​အုန်းမယ်​ ခယ်​မကိုလိုးရတာ မိန်းမကို လိုးရတာထက်​ပို​ကောင်းတာပဲ ၊ သာမန်​မိန်းမထက်​ မလုပ်​ရတဲ့ သူများဟာကို လိုးပြစ်​ရတဲ့ အရသာကပိုမိုက်​တာပဲ စတဲ့ စိတ်​အရိုင်း​တွေ တခုပြီးတခု​ပေါ်လာပြီး လီးကလည်းအရမ်း​တောင်​ လဥ​တွေပါကျင်​တက်​လာတယ်​၊ကျွန်​​တော်​သိလိုက်​တယ်​ ပြီး​တော့မယ်​ဆိုတာကို ချက်​ခြင်းပဲ သူ့အလိုလို မဖြူရဲ့ လက်​နှစ်​ဖက်​ကို လှမ်းဆွဲပြီး မဖြူကို ဆွဲလှန်​လိုက်​ပါတယ်​ ၊ ခါး​ကော့ပြီး ဖင်​နဲ့ဒူးအ​ပေါ်မှာအားက အပြည့်​​ရောက်​သွားတာနဲ့ ​သောက်​ဖုတ်​ကအလိုလိုညစ်​လိုက်​သလိုပါဖြစ်​သွားတာ၊ လက်​နှစ်​ဖက်​ကို ကြက်​​ခြေခတ်​ဆွဲပြီး ကျွန်​​တော်​လည်းတချက်​ခြင်းကို အားရပါးရ ​စောင့်​တာ ပထမ​တော့ ပုံမှန်​​ပေါ့ ​နောက်​​တော့ ဘယ်​လိုမှမထိန်းနိုင်​​တော့ပဲ ဆက်​တိုက်​ပြစ်​​စောင့်​ပြစ်​တာ တဖုန်းဖုန်း တအားအားနဲ့ အ​မေ့ ​သေပါပြီ​တွေ​ကော တအင်းအင်းတရှုးရှုး​တွေ​ရောအစုံပဲ၊ ကျွန်​​တော်​လည်း လုပ်​ရင်းနဲ့ မဖြူ​ကောင်းလားဆို​တော့ အင်းအရမ်​​ကောင်းတယ်​..
အကြီးကြီးပဲ အကိုကြီးရယ်​ ပြည့်​ကြပ်​​နေတာပဲ
ကျွန်​​တော်​လည်း​ပြောလည်း​ပြော ​စောင့်​လည်း​စောင့်နဲ့ သုတ်​​တွေ လည်းထွက်​ခါနီးလာတယ်​ ဒါနဲ့ စွဲထားတဲ့ မဖြူရဲ့ လက်​​တွေကို လွတ်​​ပေးလိုက်​ပြီး သူ့ကို ကုတင်​​ပေါ်ကိုဖိချလိုက်​တယ်​၊ ကျွန်​​တော်​လည်​သူ့အ​ပေါ်က​နေထပ်​ရပ်​လိုက်​သွားပြီမှ ကုတင်​​ပေါ်ကို လက်​နှဖက်​စုံ​ထောက်​ ပြီး တဖန်းဖန်းနဲ့ ဆက်​​စောင့်​​တော့တာ၊ မဖြူက​တော့ ကုတင်​​ပေါ်မှာ ​မှောက်​ရက်​​လေးနဲ့ ဖင်​ဘူး​တောင်ျထာင်​ပြီး ကျွန်​​တော့​စောင့်​ချက်​၅
​စောင့်​ချက်​​တွေနဲ့ အပြိုင်​ ဖင်​ကြီးကို တွန်းတွန်းပြီးခံ​ပေးရှာပါတယ်​ သူ့ခမျာ အခု​တော့ မိတ်​ကပ်​ပျက်​မှာလည်းပူ​ဖို့သတိမရ​တော့ပါဘူး၊ ကျွန်​​တော်​လည်း မဖြူ့ ​ပေါင်​​တွေကို ညှပ်​ပြီး မရပ်​မနားအားကုန်​​စောင့်​​စောင့်​လိုပြီး နား​တွေအူ မျက်​စိ​တွေပြာလာပြီး မဖြူ အကိုကြီးပြီး​တော့မယ်​
မဖြူလည်းပြီးချင်​​နေပြီအကိုကြီး​စောင့်​​ပေးလို့​ပြောပြီး ​စောက်​ဖုတ်​ကြီးကိုညစ်ှထားလိုက်​တာ ကျွန်​​တော်​ဘဝမှာ အဲ့​လောက်​အကြာကြီးသုတ်​​တွေ တထစ်​ထစ်​နဲ့ထွက်​တာ ဒီအခါပထမဆုံးပဲ မဖြုကညှစ်​​ပေးတာနဲ့ ​အောက်​က သုတ်​​ကြောကပဲဖိမိ​နေလားမသိဘူး တမိနစ်​​လောက်​ ကြာတယ်​ မဖြူလည်း တဟင်းဟင်းနဲ့ ပြီးပြီ မဖြူထပ်​ပြီးပြီဆိုပြီး ကုတင်​​ပေါ်ကို ပုံကြသွားပါတယ်​ ကျွန်​​တော်​လည်း ​ချွေး​လေး​တွေစို့​နေတဲ့ မဖြူရဲ့ ဂုတ်​​လေးကိုနမ်းလိုက်​ သွား​လေးနဲ့ကိုက်​လိုက်​လုပ်​ပြီး ​အောက်​က​ကောင်​ကို နဲ့နှဲ့ပြီး လက်​ကျန်​​လေး​တွေညစ်​ထုပ်​ပြီး အသာ​လေးမတ်​တတ်​ရပ်​ပြီးဆွဲထုတ်​လိုက်​​တော့ ဗလွတ်​ဆိုပြီး ထွက်​လာပါတယ်​ အ​ရေ​တွေက​တော့ မြင်​မ​ကောင်း​အောင်​ပါပဲ ဖုတ်​လိုက်​ဖုတ်​လိုက်​ဖြစ်​​နေတဲ့ မဖြူရဲ့တင်​ပါး​လေးကို အသာငုံ့ပြီး ဖြဲကြည့်​လိုက်​​တော့ ကျွန်​​တော့​ကောင်​ရဲ့ အရွယ်​ အတိုင်း ​စောက်​ဖုတ်​​ပေါက်​က​လေးက ဟစိဟစိနဲ့ ငါးပူတင်းကို ကုန်း​ပေါ်တင်​ထားလို့အသက်​ရှု ​နေတဲ့ ပါးစပ်​​လေးကြ​နေတာပဲ ကျွန်​​တော့ရဲ့ အချစ်​ရည်​​လေး​တွေကလည်းပွက်​ကနဲ့ပွက်​ကနဲ့ ကြည့်​လို့​ကောင်း​နေတုန်း ​ဘေးကဖုန်းကထ​အော်​လာတယ်​ ​ယောက်္ခမကြီးဆက်​တာ မဖြူလဲ လူးလဲထပြီး လာ​နေပြီ ဒီမှာ အဝတ်​လဲထားပြီးသား​တွေနဲ့ ကားဘီး​ပေါက်​​နေလို့ သူများကို အကူညီ​တောင်းပြီးဖြုတ်​လဲ​နေလို့ကြာ​နေတာဆိုပြီး​ဖြေလိုက်​တယ်​ ပြီး​တော့ ကျွန်​​တော့်​ကို သူ့မျက်​လုံးရွဲကြီး​တွေနဲ့​ထောင့်​ကတ်​ပြီး တချက်​ပြုံးပြတယ်​၊ အဲ့အပြုံးက အဓိပ္ပါ​ယ်​​တွေအများကြီးပဲ ၊ တကယ်​လည်း​နောက်​ပိုင်းမှာ အခုလိုမဖြူ ပြုံးတာ အခါခါကြုံရပါတယ်​၊ အခွင့်​သင့်​ရင်​မဖြူ နဲ့ အကြိမ်​များစွာထဲက ရသလိုလုပ်​ဖြစ်​တာ​လေး​တွေ တ​နေ့ကုန်​ မချွတ်​တန်းလုပ်​တာ​တွေ မဖြူရဲ့ ပက်​ကင်​ခ​ရေ​လေးကို ကျွန်​​တော်​​ချွေလိုက်​လို့ ခ​ရေမှ သခွပ်​ပွင့်​သို့​ပြောင်းသွားပုံ​လေး​တွေကိုသပ်​သပ်​​ရေးပါအုန်းမယ်​၊ တကယ်​ဖြစ်​ခဲ့တာကို ​ရေးတတ်​သ​လောက်​​လေး​ရေးပြတာပါ ဖတ်​လို့မ​ကောင်းဘူးဆိုလဲခွင့်​လွှတ်​ပါ၊
ဖုန်း​ပြောပြီး​တော့ မဖြူ လည်းအမြန်​ကုန်းထပြီး ​ထမိန်​အ​ဟောင်းနဲ့ လက်​နိုက်​ပြီး အ​ရေ​တွေသုတ်​ အကွက်​​တွေအပြည့်​နဲ့ အိပ်​ယာခင်းကို ဆွဲဖြုတ်​ လုံးပြီးကုတင်​​အောက်​အမြန်​ထည့်​ ​ဘေးကျ​နေတဲ့ ရင်​စည်း​လေး​ကောက်​ကိုင်​ပြီး ကျွန်​​တော့်​ကို ချိပ်​တပ်​​ပေးဖို့​ပြောလာပါတယ်​၊ အခုထိ နှစ်​​ယောက်​လုံး အဝတ်​မဝတ်​ရ​သေးပါဘူး ၊ မဖြူ ရဲ့ ကိုယ်​တုန်းလုံးလုပ်​ရှားဟန်​​တွေကိုကြည့်​ရင်း ကျွန်​​တော်​​ကျောက်​ရုပ်​လိုဖြစ်​​နေပါတယ်​ အ​တွေးထဲမှာ ငါမလုတ်​သင့်​တာကိုလုပ်​လိုက်​မိတာလား မှားသွားလား ​ဝေခဲ့မရဖြစ်​​နေချိန်​မှာ မဖြူရဲ့ ချိပ်​တပ်​​ပေးဖို့အသံ​ကြောင့်​ သတိဝင်​ပြီး ​ရှေ့တိုးပြီးချိပ်​တပ်​​ပေးဖ်ို့ လုပ်​မလို့မှာ မဖြူက ​ခေါင်း​လေးလှည့်​လာပြီး
ဟင်​…အကိုကြီးကလဲ မလွန်​လွန်​ဘူးလားဟင်​ အခုချက်​ခြင်းကြီးကို
စစခြင်းမဖြူ ​ပြောတာ ဘာမှန်းမသိ​ဘူးဖြစ်​​နေတာ ဒါ​ပေမဲ့ သူ့မျက်​လုံး​တွေကြည့်​​နေရာက်ို လိုက်​ကြည့်​လိုက်​မိ​တော့မှ ကျွန်​​တော်​ပါ ဟာ ကနဲ့ဖြစ်​သွားတယ်​ အားနဲ့မာန်​နဲ့ ကျွန်​​တော့်​​ကောင်​ဟာ မဖြူတင်​ပါးကို ​ထောက်​လို့ တဒုတ်​ဒုတ်​နဲ့ ​နောက်​တ​ခေါက်​အတွက်​ အသင့်​ဖြစ်​​နေ​ကြောင်း ​ခေါင်း​မော့ပြ​နေပါပြီ
ပွဲက​တော့ ပြီးသွားပါပြီ ငါမှားသွားလား​ဝေခွဲ​နေတုန်း မှာ ​အရသာသိသွားတဲ့ ​ကောင်​က အဆင့်​သင့်​ဖြစ်​ပြီးသားဖြစ်​​နေတဲ့အပြင်​ မင်းမမှားဘူး လုပ်​လို့ရတာ အကုန်​လုပ်​ဆိုတဲ့ အ​ဖြေကိုပါ​ပေးပြီးသားဖြစ်​​နေပါပြီ
ကျွန်​​တော်​​ပြောင်းလဲသွားပါတယ်​ ဘယ်​​လောက်​​ပြောင်းလဲသွားလဲဆို ​ပြောလို့မ​ကောင်းတဲ့ အထိပါ ပျိုပျိုအိုအို လုပ်​ချင်​စရာ​ကောင်းရင်​ ရ​အောင်​လုပ်​ပြစ်​တဲ့အထိ ​ပြောင်းလဲသွားပါတယ်​ မဖြူတင်​မက​တော့ဘဲ ​နောက်​တစ်​​ယောက်​​ကော တခြားတခြား​သော နီးစပ်​ရာ​တောင့်​​တောင့်​​ဖြောင့်​​ဖြောင်​​တွေ အားလုံးကိုပါ ​၊ မစားသင့်​တဲ့အရာ ပိုကြိုက်​မိသလိုဖြစ်​သွား​ပေမဲ့ ကျွန်​​တော့်​စိတ်​ကအပြစ်​လို့ အခုထိလက်​ခံ​နေစဲပါ၊ ဒါ​ပေမဲ့ အဲ့အပြစ်​ဟာ စိတ်​ထဲမှာ ​နေ​နေတုန်းမှာ ကျွန်​​တော့​ကောင်​က မဖြု တင်​နှလုံးကြားမှာ ​နေရာယူပြီးသွားပါပြီ၊ ကျွန်​​နော်​ကိုယ်​တိုင်​ ဘာက​ပြောင်းလဲ​စေခဲ့တာလဲ အ​ဖြေရှာမရ​ပေမဲ့ အ​သေချာ​ပြောင်းခဲ့တာက​တော့ မဖြူ နဲ့ စခဲ့ရတဲ့ ထို ခဏ ပါပဲ။